ယနေ့ ရရှိသောသတင်း- ရခိုင်ပြည်နယ် ဂွမြို့ လာသော ကားတစ်စီးပေါ်တွင် ဆင်စွယ်များ၊ ဆင်အရေခွံများ ဖမ်းဆီးရမိကြောင်း သိရပါသည်။ မြို့ခံလူတစ်ဦး၏ ပြောကြားချက်အရ ဆတ်သားဟုဆိုကာ အမဲရောင်ရှိသော အသားများ အသားခြောက် လုပ်တတ်သူများထံ ယခင်ရက်များက အများအပြား လာရောက်ရောင်းချကြောင်း သိရပါသည်။ ယခု ဆင်စွယ်ဖမ်းမိသောသတင်းနှင့် ဆက်စပ်၍ ဆင်သားများ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း သိရပါသည်။ ယခင်က ဂွမြိ့နယ်တွင် ယခုကဲ့သို့ ဆင်စွယ်၊ ဆင်သားရေ အရောင်းအဝယ်များ၊ ခိုးတင်တာများ မဖြစ်ဖူးကြောင်း၊ ဒေသခံများကိုယ်တိုင်ပင် အံ့သြနေကြကြောင်း သိရပါသည်။
ပြန်ကြားရေးဌာန အရာရှိကြီးတယောက်ကတော့ “ဒီနေ့ ၀န်ကြီး ရုံးတက်ပါတယ်။ မျက်နှာတော့ မကောင်းဘူး။ နှုတ်ထွက်ရမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကတော့ ရုံးထဲမှာ ပြန့်နေတယ်´´လို့ ဆိုပါတယ်။
“သိရသလောက်တော့ အဲဒီနေ့က ငိုပြတာကြောင့် လို့ ကြားပါတယ်´´ လို့ သူက ထပ်ပြောပါတယ်။
မသိသူကျော်သွား သိသူဖော်စား မန္တလေးဂေဇက်တွင်းမှရရှိသည်။
ဖြန့်ဝေသူ။ ။ မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု
ရွတ်ဖတ်ရခြင်းအကျိုး= လူချစ်လူခင်ပေါများခြင်း၊အခက်အခဲများမှ ကံဆယ်တော်မူခြင်း၊
ကျန်းမာချမ်းသာခြင်း၊ ရန်သူမျိုးငါးပါးမှ ကင်းဝေးခြင်း၊ ပြောဆိုစကားအောင်မြင်ခြင်း၊
လမ်းညွှန်း~ ရွှေ တိဂုံဘုရားတောင်ဖက်မုဒ် ဂေါပကရုံးအနီတွင်ရှိပါ သည်။
ဧရာဝတီမြစ်ကြီး ရှင်သန်ရေး မြန်မာတမျိုးသားလုံး တာဝန်
By ဒေါ်ခင်မျိုးသက် – တနင်္လာ, 15 သြဂုတ် 2011
မြန်မာတနိုင်ငံလုံး အဓိက အားထားနေရတဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ကြီး တိမ်ကောမသွားစေရေး၊ ထာဝရ ရှင်သန်ရေးဟာ မြန်မာတမျိုးသားလုံးအရေး ဖြစ်တာမို့ ၀ိုင်းဝန်းကာကွယ်ကြဖို့ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားတွေက သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သမိုင်းဖြစ်တဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ကြီး ရှင်သန်ရေးအတွက် လက်ရှိ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ မြစ်ဆုံစီမံကိန်း အပါအ၀င် တခြား ဆည်တည်ဆောက်ရေးတွေကိုလည်း ချက်ချင်း ရပ်ဆိုင်းပေးဖို့ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရကို တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ဒေါ်ခင်မျိုးသက်က တင်ပြပေးထားပါတယ်။
ဧရာဝတီမြစ်ကြီးဟာ မြန်မာနိုင်ငံ လူထုတရပ်လုံးရဲ့ လူမှုစီးပွား မှီခိုအားထားရာ အသက်သွေးကြော ဖြစ်သလို မြန်မာ့သမိုင်းနဲ့ တိုင်းရင်းသားရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အမွေအနှစ် ဖြစ်တာမို့ ဒါတွေ မပျက်စီးစေဖို့အတွက် ပြည်သူတွေရဲ့ မျက်နှာကို ထောက်ထားပြီး လက်ရှိ တည်ဆောက်နေတဲ့ ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းတွေကို ချက်ချင်း ရပ်ဆိုင်းထားဖို့ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများ အဖွဲ့က တောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် တဦးဖြစ်တဲ့ ကိုထွန်းမြင့်အောင်က ပြောပါတယ်။
“ဒီဧရာဝတီမြစ်ကြီးဟာ မြန်မာ့သမိုင်း ဖြစ်တယ်၊ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု ဖြစ်တယ်၊ မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားတွေရဲ့ လူမှုစီးပွား ဘ၀တွေကို သယ်ဆောင်တယ်။ တနည်းအားဖြင့် ဧရာဝတီမြစ်ရဲ့ ရှင်သန်မှုက ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ ရှင်သန်မှုပါပဲ။ တကယ်လို့သာ ဧရာဝတီမြစ်ကြီးကို အခုအတိုင်း ဆက်ပြီး သွားနေဦးမယ်ဆိုရင် ဧရာဝတီမြစ်ကြီးဟာ မကြာခင်မှာပဲ တိမ်ကော ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဧရာဝတီမြစ် တိမ်ကောသွားသည်နှင့်အမျှ ကျနော်တို့ ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ နေ့စဉ်ဘ၀တွေ၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးတွေ၊ သွားရေးလာရေးတွေ၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေ အကုန်လုံး ထိခိုက်ကုန်မယ်။
“နောက် ရေမြေသတ္တ၀ါတွေ၊ ဇီဝမျိုးစိတ်တွေ အကုန်လုံး ပျက်စီးကုန်မယ်။ ဒီမြစ်ကြီးသာ ပျောက်သွားမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ တိုင်းသူ ပြည်သားတွေရဲ့ ဘ၀ဟာ လုံးဝကို မတွေးဝံ့စရာပဲ။ ဒါကြောင့် ဒီအခြေအနေမျိုးကို မရောက်အောင် တိုင်းပြည်ရဲ့ မျက်နှာကို ထောက်ပြီးတော့ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ အနေနဲ့ ဆည်စီမံကိန်းတွေကို ရပ်တန့်ပြီးတော့၊ ပညာရှင်တွေနဲ့ တိုင်ပင် ဆွေးနွေးပြီးတော့ တိုင်းပြည်ကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်း၊ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း အသိပေး ထုတ်ပြန်ဖို့ လိုပါတယ်။”
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အသက်သွေးကြော ဖြစ်တဲ့အပြင် အာရှတိုက် အတွက်ပါ အရေးပါတဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ကြီးဟာ အခုအခါမှာ စီးပွားရေးသမားတွေရဲ့ စည်းကမ်းမဲ့ ရွှေတူးဖော်မှုတွေကြောင့် ညစ်ညမ်းပြီး အလွန်အကျွံ သစ်ခုတ်မှုတွေ၊ မြစ်လက်တက်တွေမှာ ဆည်တည်ဆောက်မှုတွေကြောင့် သောင်ထွန်းပြီး အခြေအနေ အလွန်အမင်း ဆိုးဝါးနေတာ တွေ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“ကျနော်တို့ရဲ့ မိခင် ဧရာဝတီမြစ်ကြီးရဲ့ ကျန်းမာရေး အခြေအနေက အတော့်ကို စိုးရိမ်စရာ အခြေအနေ ရောက်နေပြီဗျ။ ကျနော်တို့ ပြည်သူပြည်သားတွေ ကိုယ်တိုင် တွေ့မြင်နေရတာပါ။ ဥပမာ စစ်ကိုင်းတံတားနားမှာ သောင်ပြင်တွေဟာ နဂိုကထက်ကို ပိုပြီးတော့ တနှစ်ထက်တနှစ် ဆိုးဆိုးရွားရွား ကျယ်ပြန့်လာတယ်။ ပြည်မြို့နားမှာ ဆိုရင်လည်း ဧရာဝတီမြစ်ထဲက သဲသောင်ပြင်ကြီးပေါ်မှာ နွေရာသီမှာဆိုရင် စားသောက်ဆိုင်တွေ ဖွင့်ကြ၊ အပန်းဖြေစခန်းတွေ ဖွင့်ကြတဲ့ အခြေအနေမျိုးထိအောင် ရောက်နေပြီ။
“နောက် မန္တလေးနဲ့ ဗန်းမော်ကြားဆိုလည်း နွေရာသီဆိုရင် ဗန်းမော်ဆိပ်ကမ်းကို သင်္ဘောတွေက ကပ်လို့မရဘူး။ ရေထုညစ်ညမ်းမှုတွေ၊ ကမ်းပါးပြိုမှုတွေကလည်း ဆက်တိုက်ကို ဖြစ်နေတယ်။ ဧရာဝတီမြစ်ရဲ့ အခြေအနေက အဲဒီလောက်ကို ဆိုးနေတယ်။”
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုဆိုင်ရာ EIA အစီရင်ခံစာတွေအရ မြစ်ဆုံဆည် တည်ဆောက်မှုကို ဆက်ပြီး မလုပ်သင့်သလို လက်တွေ့ မြင်နေရတဲ့ ဒီလို အခြေအနေ ဆိုးနေတဲ့ ဧရာဝတီမြစ်အတွက် ပိုပြီး ဆိုးဝါးစေမယ့်၊ မြစ်ကြောင်း ပိတ်ဆို့စေတဲ့ ဆည်တည်ဆောက်မှုတွေကို မလုပ်သင့်ဘူးလို့လည်း ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အမိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အသက်သွေးကြောဖြစ်တဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ကြီးအတွက် ရဟန်းသံဃာ၊ ကျောင်းသားနဲ့ ပြည်သူအပြင် ရဲနဲ့ တပ်မတော်သားတွေသာ မက တတ်သိပညာရှင်တွေ၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ လူမှုရေး အင်အားစု အသီးသီးက အမျိုးသားရေးအသွင်နဲ့ ပါဝင်ကြဖို့လည်း နှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။
“ဧရာဝတီရဲ့ ကံကြမ္မာက ကျနော်တို့ ပြည်သူပြည်သားတွေ တိုင်းပြည်ရဲ့ ကံကြမ္မာပါပဲ။ အဲတော့ သားစဉ်မြေးဆက်ရဲ့ အနာဂတ်အတွက် ကျနော်တို့ဟာ ဒီအတိုင်းပဲ လက်ပိုက်ကြည့်နေလို့ မရတော့ဘူးဗျ။ ကိုယ့်ကံကြမ္မာ အတွက်ကို အားလုံးက သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်းနဲ့ ၀ိုင်းဝန်းလက်တွဲပြီး ဧရာဝတီမြစ်ကြီး ထာဝရ ရှင်သန် စီးဆင်းနိုင်စေရေး အတွက်ကို တောင်းဆိုမှုတွေ၊ အရေးဆိုမှုတွေ၊ လှုပ်ရှားမှုတွေကို အမျိုးသားရေး တာဝန်တရပ် အနေနဲ့ ၀ိုင်းဝန်း ဆင်နွှဲကြဖို့ လိုနေပြီလို့ ကျနော်တို့ ပြောချင်တာပါ။”
ဒါ့အပြင် ဒီရေကာတာ စီမံကိန်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတကာက ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်တွေနဲ့ စနစ်တကျ ဖွဲ့စည်း တိုင်ပင်ပြီး သုတေသနပြု ဆန်းစစ်ချက်တွေကို ပြည်သူလူထုကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း အသိပေးပြီး သဘောထားဆန္ဒ ခံယူဖို့လည်း အစိုးရသစ်အဖွဲ့ကို တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
ဧရာဝတီ Tuesday, 16 August 2011 17:19 .
ဒီထဲက သုံးသပ်ချက်တွေကိုေ���ာ့ အတော်ကို စိတ်ပိန်ပါသည်
written by ညိုချော, August 16, 2011
နိုင်ငံမှာ မြေကွက်တွေကို တရားမ၀င် အကွက်ချရောင်း၊ နိုင်ငံအတွင်း တရားမ၀င် ကားသွင်း … ဒါတွေက သာမန် လာဘ်စားမှု လားဗျာ။ ကြည့်ကျက်လည်း သုံးသပ်ကြပါဦး စစ်ဘက်ရေးရာ လေ့လာသူတို့ရယ်။ ရှေ့ကလူတွေ မဟုတ်တာတွေ အတော် လုပ်သွားလို့ မဟုတ်တဲ့လမ်းက အတော်ဖုံ နေပါပြီ၊ ဒီမဟုတ်တဲ့လမ်းကို ဆက်လိုက်စေ ချင်နေတာလားဗျ။ ဒါမျိုး လုပ်တဲ့သူတွေကို အရာ ချတာကတော့ တိုင်းပြည် အကျိုးအတွက် ဘယ်သူက ဘယ်အချိန်မှာပဲ လုပ်လုပ် ကြိုဆိုသင့်တဲ့ ဟာပါ။ ရှေ့က မဟုတ်တာတွေ လုပ်သွားကြတဲ့ သွားလေသူများ ကိုပါ ထပ်ပြီး ဆွဲစိနိုင်အောင် တွန်းပို့နိုင်ရင် ထပ် တိုက်တွန်းကြဖို့ပါပဲ။
လင်းသန့် Monday, 15 August 2011 18:11 .
ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် အစိုးရ ၀န်ကြီး ဦးအောင်ကြည်တို့ မကြာသေးမီက ၂ ကြိမ် တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်း၏ ရလဒ်တခုအဖြစ် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား တချို့ မကြာခင် ပြန်လွတ်လာမည်ဟု သုံးသပ်သူများက ပြောဆိုနေကြသည်။
ဆွေးနွေးချက် အသေးစိပ်ကို နှစ်ဘက်လုံးက လူသိရှင်ကြား ပြောဆိုခြင်း မရှိသေးသော်လည်း ပူးတွဲ ကြေညာချက်များ ထုတ်ပြန်ပြီး ဆက်လက် တွေ့ဆုံသွားကြရေးကို အလေးပေး ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။
ဆွေးနွေးပွဲများတွင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလွှတ်ရေး၊ တိုင်းရင်းသားဒေသ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခ၊ ဖျက်သိမ်းသည်ဟု ကြေညာခံထားရသည့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ဆက်လက် ရပ်တည်ရေး စသည့် အကြောင်းအရာများ ပါဝင်သည်ဟု ဦးအောင်ကြည်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့နှင့် နီးစပ်သည့် အသိုင်းအ၀န်းက ပြောသည်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂၀၀၀ ကျော် အနက် တချို့ကို ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ် အတွင်း ပြန်လွှတ်ပေးဖွယ် ရှိသည်ဟု ဆွေးနွေးပွဲနှင့် နီးစပ်သည့် အမည်မဖော်လိုသူတဦးက ပြောသည်။
ကိုမင်းကိုနိုင် ကဲ့သို့သော ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ၊ ဦးခွန်ထွန်းဦး အပါအ၀င် တိုင်းရင်းသားခေါင်း ဆောင်များ၊ လူရွှင်တော် ဇာဂနာ စသည့် ထင်ရှားသူများ ပါဝင်ခြင်း ရှိမရှိ မသိရသေးပေ။
NLD ပါတီ ရုံးအဖွဲ့မှူး ဦးဝင်းထိန်က “နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား လွှတ်ပေးရေးကိစ္စက အင်မတန် သိမ်မွေ့စွာနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ကိုင်တွယ်နေရတာပါ။ NLD အနေနဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ ပြန်လွတ်လာဖို့ကို တစိုက်မတ်မတ် တောင်းဆိုနေပါတယ်။ လွှတ်ပေးလာရင်တော့ အကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့ မျှော်လင့်တာပေါ့” ဟု ပြောသည်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို ချွင်းချက်မရှိ ချက်ချင်း လွှတ်ပေးပြီး နိုင်ငံရေး ဖြစ်စဉ်တွင် ပါဝင်ခွင့်ပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ အကြိမ်ကြိမ် ထိန်းသိမ်းခံရသည့် ထိုပုဂ္ဂိုလ်များသည် အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် ငြိမ်းချမ်းသောနည်းဖြင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့သူများ ဖြစ်ကြောင်း AAPP ခေါ် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းက ပြောသည်။
“နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာ ကောင်းဖို့အတွက် လုပ်တဲ့အနေနဲ့ အစိုးရဘက်က ထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို ချန်ထားပြီး လွတ်ခါနီးသူတွေနဲ့ တချို့လောက်ကို လွှတ်ပေးလာနိုင်ပါတယ်” ဟု ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် AAPP အသင်း အတွင်းရေးမှူး ကိုတိတ်နိုင်က သုံးသပ်သည်။
ယခင်ကလည်း ထိုသို့ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် သာဓကများ ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။
သြဂုတ်လ ၁၂ ရက်နေ့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် အလုပ်သမား ၀န်ကြီး ဦးအောင်ကြည်တို့ ဒုတိယ အကြိမ် တွေ့ဆုံပြီးနောက် နှစ်ဘက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပဋိပက္ခ ရှောင်ရှားပြီး အပြန်အလှန် ကူညီ ပူးပေါင်းရေးလမ်းစဉ်ကို ရှေ့ရှုကြောင်း၊ ဆက်လက် တွေ့ဆုံမည်ဖြစ်ကြောင်း ပူးတွဲ ကြေညာချက်ထုတ်ခဲ့သည်။
ဆွေးနွေးပွဲ၏ ရလဒ်နှင့်ပတ်သက်၍ NLD ပါတီ တာဝန်ရှိသူတဦးက “ကျနော်တို့နဲ့ အစိုးရကြားမှာတော့ တချို့တိုးတက်မှုတွေရှိတယ် လို့ ပြောလို့ရတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း လာမယ့် ဆွေးနွေးမှုတွေမှာ အချိန်အပိုင်းအခြားနဲ့ လုပ်ဆောင်ဖို့ အစိုးရ ၀န်ကြီးကို တောင်းဆိုခဲ့တယ်” ဟု ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဆွေးနွေးပွဲအကြောင်း ပြောဆိုရန် အသင့်မဖြစ်သေးဟု ဆိုသည်။
“ပြည်သူလူထု လိုချင်တာကို ကျမသိပါတယ်။ ပြည်သူလူထုဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ ကျမ ကြိုးစားနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မဖြစ်နိုင်တဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေတော့ ကျမ မပေးချင်ပါဘူး” ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ထိုဆွေးနွေးမှုများနှင့် ပတ်သက်ပြီး တနင်္ဂနွေနေ့က ပဲခူးမြို့လူထုနှင့်တွေ့ဆုံရာတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ဦးအောင်ကြည်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့သည် ယခင် စစ်အစိုးရ လက်ထက်ကတည်းက အကြိမ်ကြိမ် တွေ့ဆုံခဲ့သော်လည်း သိသာထင်ရှားသည့် တိုးတက်မှုများ မရှိခဲ့ပေ။ အရပ်သားအစိုးရအဖြစ် အသွင်ပြောင်းပြီးနောက်ပိုင်း တိုင်းရင်းသား ဒေသ စစ်ပွဲများ ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်လာချိန်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံမှုကို ထပ်မံ စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယခု တွေ့ဆုံမှုများသည် မြန်မာအစိုးရက ၂၀၁၄ ခုနှစ် အာဆီယံအသင်း အလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌ ရာထူးအတွက် အသင်းက တောင်းဆိုထားသည့် စံချိန် စံညွှန်းများကို ဖြည့်ဆည်းပြသည့်အနေဖြင့် ကြိုးပမ်းမှုတရပ်ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်သူများက ဆိုသည်။
အစိုးရ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်က အာဆီယံ ဥက္ကဋ္ဌ ရာထူးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံက အဆင်သင့် ဖြစ်နေပြီဟု မကြာသေးမီက ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။
ထို့အတွက်ကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ၀န်ကြီး တွေ့ဆုံမှု၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တို့နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး စကားဆိုနေခြင်းများကို သတိနှင့် ကြိုဆိုနေကြပြီး မြန်မာအစိုးရက ငြိမ်းချမ်းရေး သပြေခက် ဟန်ပြ ကမ်းနေခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဝေဖန်နေကြသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဦးအောင်ကြည်တို့ ပူးတွဲ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ချိန်၌ နေပြည်တော်တွင်လည်း အစိုးရ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်နေသည်။ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIA နှင့် တိုက်ခိုက်နေမှု၊ NLD ပါတီ ပြန်လည် မှတ်ပုံတင်ရေး၊ NLD နှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး၊ ဒေါ်လာအစားထိုး FEC ငွေကြေးသုံးစွဲမှု ရပ်စဲပြီး နိုင်ငံတကာ ငွေကြေး ရံပုံငွေအဖွဲ့ IMF နှင့် ညှိနှိုင်းရေး စသည့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာများကို ထုတ်ဖော် ပြောကြားခဲ့သည်။
written by ရာဇာ, August 15, 2011
မြန်မာပြည် ကိုသိန်းတန် သီဆိုခဲ့ တဲ့သီချင်းလေး တပုဒ်ကို ပြန်ဆိုပြ ရရင်တော့…….မျှော်သာမျှော် သည် မယုံကြည်…ရင်မှာ ဝေဒနာ အပွင့်ခက် အဝါနီ… .ဆိုသလို ဖြစ်နေမလား လို့ပါ. …ပြုသူ အသစ် ခံသူ အဟောင်း နော်.. …..
written by Aung Win, August 16, 2011
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့်ဦးအောင်ကြည် နောက်ထပ်၂-၃ကြိမ်တွေ့ ပြီးလို့ မှ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ မလွတ်မြောက်ဘူး ဆိုရင်တော့ နှစ်ဖက်စလုံးက ပြည်သူကို ညာနေတာလို့ ဘဲ သတ်မှတ်ဖို့ ဘဲ ရှိတော့မယ်။ လွှတ်ပေးခဲ့ ရင်- ၈၈ -ကျောင်းသားေ ခါင်းဆောင်များနှင့်တိုင်းရင်းသားေ ခါင်းဆောင်များ ပါဝင်ရမည်။
written by Duwa, August 16, 2011
မဖြစ်နိုင်တဲ့မျော် လင့်ချက်ဆိုတာ ဖယ်ဒရယ် ကိုပြောတာလား
written by လှလှမြင့်, August 16, 2011
ကိုအောင်ဝင်းရေ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေး ကိစ္စမှာ သူတို့လွှတ်ပေးမှရမဲ့ အရေးပါ။ ဒေါ်စုက ဒီကိစ္စကို ဘယ်လိုညာရမှာလဲ။
written by phyuphyu, August 16, 2011
ဘာာာာာာာာာာာာာာမြှ ဖစ်လာမယ်လို့ကို မမျှော်လင့်တော့ပါ။
written by ကိုရွှေ (ပင်းချောင်း), August 16, 2011
နှစ် ၂၀ ကျော်ကြာလည်း အလိမ်ခံခဲ့ပြီးပြီ ဆိုတော့ နောက် ဘယ်လောက်ကြာ ဆက်ပြီးအလိမ်ခံနေအုံးမှာလဲ။
ခုထိလည်း အရေးပါတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ မဆွေးနွေးနိုင်သေးဘူး။ ဦးအောင်ကြည်နဲ့ ဆွေးနွေးခဲ့တာတွေ ကလည်း
ပြည်သူလူထု သိခွင့် မရဘူး ဆိုတော့ ဘာကိုပြည်သူလူထုကေ မျှာ်လင့်ရမှာလဲ။ နှစ်ပေါင်း ဘယ်လောက်ကြာ ဆက်ပြီး
အပျော့ဆွဲ ဆွဲနေအုံးမှာလဲ။ ကဲ — ဘာလုပ်ကြာမလဲ ပြည်သူတို့။
အစိုးရသစ်လည်း မြေသိမ်း – ခင်ဦးသာ Tuesday, 16 August 2011 19:55 .
အရပ်သားအစိုးရသစ် လက်ထက်တွင်လည်း တိုင်းရင်းသားဒေသ လယ်မြေသိမ်းယူမှု အများအပြား ပေါ်ပေါက်နေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အထူးသဖြင့် မွန်၊ ရှမ်း၊ ရခိုင် ပြည်နယ်များ နှင့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှ လယ်သမားတို့၏ ဘိုးဘွားပိုင်လယ်မြေ၊ နွားစားကျက်မြေ၊ ဥယာဉ်ခြံမြေ၊ ရာဘာခြံမြေများ အသိမ်းခံနေရသည်ဟု ဒေသခံများက ပြောသည်။
ဤအတောအတွင်း မြေသိမ်းခံရမှုများအကြောင်း အစီရင်ခံစာတစောင် ထွက်ပေါ်လာရာ မေလမှ စတင်ပြီး မွန်ပြည်နယ်နှင့် တနင်္သာရီတိုင်းအတွင်း ဒေသခံစစ်တပ်က လျော်ကြေး မပေးဘဲ သိမ်းယူလိုက်သည့် ရာဘာခြံဧက ၄၀၀၀ ၀န်းကျင် ရှိကြောင်း၊ ဒေသခံ ၂၄၀ ၏ ရာဘာခြံများ ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
“ခြံပိုင်ရှင်တွေကို လုံခြုံရေးအရဆိုပြီး ခြံထဲကို လုံးဝ ပေးမ၀င်တော့ဘူး၊ တကယ်လို့ ခြံထဲကိုဝင်ပြီးတော့ ရာဘာစေးခြစ်မယ် ဆိုရင် ပိုက်ဆံပေးရမယ် ဆိုပြီး စစ်တပ်က ငွေတောင်းတာတွေ၊ ခြိမ်းခြောက်တာတွေ လုပ်လိုက်တော့ အလုပ်လက်မဲ့တွေဖြစ်ပြီး ဒုက္ခရောက်နေကြတယ်” ဟု အစီရင်ခံစာကို ထုတ်ပြန်သည့် မွန်ပြည်နယ် လူ့အခွင့် အရေးဖောင်ဒေးရှင်း၏ တာဝန်ခံ ကိုနိုင်ဦးမွန်က ရှင်းပြသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းအတွင်း ဖြန့်ချိလိုက်သည့် ထိုအစီရင်ခံစာကို သမ္မတဦးသိန်းစိန်၊ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်တို့ထံ တင်ပြထားကြောင်း စစ်တပ်၏ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်နေမှုများအား စုံစမ်းပြီး လယ်သမားများအတွက် နစ်နာကြေးပေးရန်၊ အဓမ္မသိမ်းယူမှုများ ဆက်လက် မပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် တားဆီးပေးရန်တို့ကို တောင်းဆိုထားကြောင်း သူက ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၁၀ နှစ် အတွင်း မွန်၊ တနင်္သာရီး၊ ကရင် ဒေသခံစစ်တပ်က သိမ်းယူထားသော လယ်မြေဧက စုစုပေါင်း ၂၀၀၀၀ ၀န်းကျင် အထိ ရှိသည်ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
စစ်တပ်၏ မတရားလုပ်ဆောင်မှုကို ဆယ်စုနှစ်ချီ ခံခဲ့ရသော်လည်း ယခု အစိုးသစ်လက်ထက်တွင် အပြောင်းအလဲ ဖြစ်လာမည်ဟု မျှော်လင့်ထားကြောင်း မွန်ပြည်နယ်၊ ကျိုက်မရောမြို့မှ ရာဘာခြံ အသိမ်းခံထားရသူ တဦးက ဆိုသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်လည်း အလားတူ ဖြစ်ပွားနေသည်။ ကျောက်ဖြူမြို့နယ်မှ တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွယ်တန်းမည့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်း တလျှောက် လယ်မြေဧက ၁၀၀၀ နီးပါးကို ဒေသခံ မြေစာရင်းဌာနနှင့် အာဏာပိုင်တို့က ယခုရက်ပိုင်းတွင် သိမ်းယူလိုက်သဖြင့် ပြည်နယ်အစိုးရနှင့် ဒေသခံနိုင်ငံရေးပါတီကို တိုင်ကြားထားကြောင်း လယ်သိမ်းခံရသည့် လယ်သမားတချို့က ပြောသည်။
အဓမ္မ အသိမ်းခံရသည်ဟူသော မြေများမှာ ငစိုင်းပြင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဦးဂင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ထောင့်ချောင်း၊ ကုလားပါတောင်၊ စစ်တော စသည့် ကျေးရွာအုပ်များမှ ဖြစ်သည်။ နွားစာကျက်မြေတွင် နွားများ ခြေမချရတော့ဟု ဦးဂင်းရွာသား တဦးက ဆိုသည်။
“ကျနော်တို့ဒေသခံ ၁၀၀ ကျော်က လက်မှတ်ထိုးပြီး ဒေသခံပါတီ၊ သမ္မတနဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကို တိုင်ထားတယ်၊ ဒါပေမယ့် စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေက နောက်ကွယ်ကထောက်ပံ့ထားတော့ အနိုင်ရမယ် မထင်ပါဘူး” ဟု သူက ပြောသည်။
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သူ ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း ဦးမောင်ဦးအား ကျောက်ဖြူမြို့နယ်မှ မြေကွက်တချို့ကို သိမ်းယူမှုဖြင့် ပြီးခဲ့သည့်လတွင် တရားစွဲခဲ့ကြသော်လည်း ဦးမောင်ဦးသာ အနိုင်ရခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းတလျှောက် မြေနေရာများ၊ ကျောက်ဖြူရေနက်ဆိပ်ကမ်း စီမံကိန်း ဆက်စပ် မြေနေရာများကို စီမံကိန်း လုပ်ဆောင်နေသော ကုမ္ပဏီတို့က တဧကလျှင် ကျပ် သိန်းဆယ်ချီ၍ ပေးဆောင်နေခြင်းကြောင့် အာဏာပိုင်များက အပြိုင်အဆိုင် သိမ်းယူနေကြခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဦးဂင်းရွာသားက ဆိုသည်။
သိမ်းယူခံလိုက်ရသည့် မြေကွက်များအနက် အချက်အချာ ကျသည့် နေရာဖြစ်ပါက ၁၀ ဧက ၀န်းကျင် မြေကွက်တခုလျှင် ကျပ်ငွေ သိန်း ၅၀၀ မှ ကျပ်သိန်း ၁၀၀၀ အထိ ဈေးပေါက်နေကြောင်း ဒေသခံများက ပြောသည်။
ကျောက်ဖြူဒေသခံတဦးဖြစ်သည့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ၏ ပြည်နယ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးတင်ဖေကလည်း လယ်သမားများ၏ တိုင်စာအများအပြားကို လက်ခံရရှိထားသည်ဟု ဆိုသည်။ ထိုကိစ္စများအား ဖြေရှင်းပေးရန် ပြည်နယ်ဝန်ကြီး ချုပ် ဦးလှမောင်တင်ထံ သောကြာနေ့က တင်ပြထားကြောင်း ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
အစိုးရသစ်ပြောင်းလဲသွားသော်လည်း လယ်မြေသိမ်းယူမှု၊ လာဘ်ပေးလဘ်ယူမှု၊ အခွန်အခ မတရားကောက်ခံနေခြင်းတို့သည် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြစ်ပေါ်နေဆဲ ဖြစ်သည်ဟု သိရကြောင်း ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်၊ ပင်လုံမြို့နယ် အာဏာပိုင်တို့ကလည်း လယ်မြေများကို လုပ်ငန်းရှင်များထံ ကာလပေါက်ဈေးဖြင့် ရောင်းနေကြောင်း ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဝင် တဦးက ဧရာဝတီကို ပြောသည်။ ဒေသခံ စစ်တပ်၏ တပ်ရင်းမှူးတဦး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မြေစာရင်းဦးစီးဌာန တာဝန်ရှိသူများက အကွက်ရိုက်ကာ ရောင်းချနေခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
လယ်မြေ အသိမ်းခံရသူများအရေး ဆောင်ရွက်ပေးနေသူ ရှေ့နေ ကိုဖိုးဖြူက လယ်မြေသိမ်းမှုပုံစံများ ပြောင်းလဲနေပြီဟု ဆိုသည်။
လယ်မြေသိမ်းယူမှုကို ယခင်က စစ်အရာရှိများ၊ လုပ်ငန်းရှင်များ ကိုယ်တိုင် လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း၊ ယခုအခါ နောက်ကွယ်က ထောက်ပံ့မှုပေးကာ ဒေသခံ စီးပွားရေး သမားများမှ တဆင့် သိမ်းယူနေကြခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ကိုဖိုးဖြူက ပြောသည်။
ရုန်ကုန်တိုင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်းမှ သိမ်းယူထားသော လယ်ယာမြေများအတွက် တန်ကြေး တစုံတရာ ရရှိရေး အတွက် လာမည့် လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများ၌ စာတမ်းတစောင်ကို ပုဂ္ဂလိက အနေဖြင့် တင်သွင်းသွားမည်ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
By နိုင်ကွန်းအိန် – တနင်္လာ, 15 သြဂုတ် 2011
ကျော်ဆန်း၊ တင်အေး အပါဝင် ၀န်ကြီး (၃) ပါး ပြုတ်လို့ သတင်းထွက်နေ။ သိန်းစိန်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ လုံးဝပေါင်းချင်။ တင်အောင်မြင့်ဦး အုပ်စုက လက်မခံ။ မြန်မာစစ်အုပ်စုထဲမှာ ထိပ်တိုက်ဖြစ်နေတယ်လို့ စစ်အုပ်စု အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ နီးစပ်သူများပြောပြချက်အရ သိရပြီး။ မနက်ဖြန် နေပြည်တော်မှာ သိန်းစိန် မိန့်ခွန်းချွေမယ်ကြားသိရပြီး။ ရန်ကုန် သတင်းထောက်တွေတော့ နေပြည်တော် အပြေးအလွှား တက်ကုန်ကြပြီ။
src:We fight we win
BURMA RELATED NEWS – AUGUST 17, 2011
Reuters – Myanmar papers lift slogans attacking foreign media
Asian Correspondent – Burma allowsavisa to the UN Envoy this time, why?
ASIAONE – Taiwan’s opposition visits Aung San Suu Kyi
KETK 56 Tyler – Nacogdoches ISD to discuss preparations for Burmese students
Bernama – Indonesians Lead In Biometric Registration
Asian Tribune – Sri Lankan Fishermen rescued in Myanmar
Proactive Investors UK – Eros International wins distribution deals in Japan, Romania and Myanmar
Sri Lanka Guardian – Enhanced ties between Sri Lanka and Myanmar
Gulf Times – Domestic workers from new countries
The Irrawaddy – Mae Sot Residents Receive Survival Training
The Irrawaddy – Burma’s President Invites Exiles to Return Home
The Irrawaddy – More Hostilities Expected in Southern Karen State
Mizzima News – The Bogyoke’s conflicted hold over Burma
Mizzima News – Views on Burmese president’s call for citizens abroad to come home
Mizzima News – Burmese political parties invited to national level workshop
DVB News – Kachin, Shan armies rubbish govt claims
YANGON | Wed Aug 17, 2011 3:31am EDT
Aug 17 (Reuters) – Myanmar’s state-run newspapers dropped back-page banners attacking Western media for the first time in four years on Wednesday, the latest indication its new government could be softening its stance towards opposition voices.
Three official newspapers dropped half-page slogans that were running daily, accusing the Voice of America (VOA) and the British Broadcasting Corp (BBC) of “sowing hatred among the people”, and other Western media of “generating public outrage”.
အဆိုတော်တစ်ဦးက စီးရီးတစ်ခုလုံးကို ဂျီမေးလ်မှ အခမဲ့ဖြန့်ဝေမည်ဟုဆို
ဂစ်တာနိုင်ဇော်၏ ဂစ်တာဖန်တီးမှုများပါဝင်သော အဆိုတော်နေဇော်၏ “ဂစ်တာရီမစ်အတုနှင့်အစစ်”စီးရီးအား ဂျီမေးလ်မှ တစ်ဆင့် တောင်းယူလာပါက စီးရီးတစ်ခွေလုံးကို အခမဲ့ပို့ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်းအဆိုတော်နေဇော်ကပြောသည်။
ယခုကဲ့သို့ စီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိသည့် စီးရီးတစ်ခွေလုံးအား ဂျီမေးလ်မှတစ်ဆင့် အခမဲ့ဖြန့်ဝေမည်ဆိုပါက ခွေရောင်းအားထိခိုက်မည်ကို စိုးရိမ်မှုရှိမရှိမေးမြန်းရာ “အွန်လိုင်းကနေ ပေးလို့ ခွေရောင်းအား ထိခိုက်မှာကို စိတ်မပူပါဘူး။ နေဇော်နဲ့ ကိုနိုင်ဇော်ကို တကယ် အားပေးတဲ့ပရိသတ်က ခွေအစစ်အမှန်ကို ၀ယ်သိမ်းထားကြမှာပါပဲ”ဟုပြောသည်။
သီချင်းတောင်းယူလိုသူများအနေဖြင့် nayzaw337@gmail.com သို့တောင်းယူနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
ဒီညနေ ကြေငြာချက်အသစ် ၃ခုထုတ်ပြန်၊
(၁) ငြိမ်းချမ်းရေးကမ်းလှမ်း၊လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ ပြည်နယ်အစိုးရနှင့် အရင် ညှိ ရမည်၊
(၂)၀င်ငွေခွန်လျှော့ရာတွင်ကျန်နေသေးသော CMP လုပ်ငန်းများ
၁၀% မှ ၂% သို့ ၆လတာ လျှော့ပေး
……………….သိမ်မွေ့စွာ ကိုင်တွယ်ရမည့် မြန်မာပြည်မှ တရုတ်များအရေး …………….
တရုတ်တွေ ဝင်လာတဲ့ ရန်ကို သတိထားမိတဲ့ အုပ်စုတွေလဲ ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ နောင်တစ်ချိန်မှာ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု ပျောက်ကွယ်ပြီး တရုတ်တွေက ဝါးမျိုသွားလိမ့်မယ်လို့ အပြင်းအထန် ကန့်ကွက်တဲ့ အုပ်စုတွေလဲရှိပါတယ်။ တရုတ်ပြည်နီးပါး ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ နိုင်ငံရေးနဲ့ စာနယ်ဇင်းလောကမှာ နာမည်တစ်လုံးရှိခဲ့သူ လူထုဒေါ်အမာဟာ ဒီကိစ္စတွေကို အစောကြီးတည်းက ကြိုတင်သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ အောင်ပင်လယ်ဆူးငှက်နဲ့ အခြားစာရေးဆရာများ ကလဲ တရုတ်အန္တရာယ်ကို တောက်လျှောက် ထောက်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ ကိုးကန့်၊ ဝ ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့အမည်ခံပြီး သောင်းကျန်း ချင်တိုင်း သောင်းကျန်း၊ ဗမာလူထုကို ရိုင်းပျစွာ ဆက်ဆံတဲ့ တရုတ်တွေကို မကျေနပ်ကြတဲ့ ဒေသခံတွေပါ။ ဒေသခံတွေအနေနဲ့ တရုတ် တစ်ယောက်နဲ့ ပြဿနာတက်ရင် ငြိမ်းချမ်းရေးကို နှောင့်ယှက်သူအဖြစ် အမှုပတ်ပါတယ်။ ငွေအင်အားတတ်နိုင်တဲ့ တရုတ်တွေကြောင့် ဒေသခံတွေအနေနဲ့ တရုတ်တွေနဲ့ တရားတဘောင် ရင်ဆိုင်ခြင်း မပြုနိုင်ကြပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း တရုတ်မုန်းတီးရေး အုပ်စုတွေဟာ အားမကောင်းသော်လည်း အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ ရှိနေကြ ပါတယ်။
မကြာသေးမှီကတော့ မန္တလေးမှာ တရုတ်ကုန်သည် အုပ်စုနဲ့ ဗမာဒေသခံတွေ တင်းမာမှုဖြစ်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေး စိတ်ဓာတ်ဟာ ဒေသခံတွေအတွင်းမှာ တော်တော်ကျယ်ပြန့်လာပါတယ်။ အရင် အတူ ယှဉ်တွဲနေထိုင် ခဲ့သမျှ နောက်ပိုင်းဝင်လာတဲ့ တရုတ်တွေရဲ့ မောက်မာရိုင်းစိုင်းမှု၊ တရုတ်အလုပ်ရှင်နဲ့ ဗမာအလုပ်သမား တွေပြဿနာ စသည်ဖြင့် ကိစ္စမျိုးစုံဖြစ်နေခဲ့တာတွေက ကျောက်ဝိုင်းမှာ ပေါက်ကွဲလုနီးနီး ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒေသခံတွေ အနေနဲ့ စီးပွားရေးနိမ့်ပါးနေတာ၊ အစိုးရအပေါ်မှာ မကျေနပ်ချက် အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိ ရှိနေတာစသည်ဖြင့် အတွင်းကြိတ် ဖြစ်နေတဲ့ ဒေါသတွေဟာတရုတ်လူမျိုး တွေဘက် မြှားဦးလှည့် သွားပြန်ပါတယ်။ ဒီကြားထဲမှာ မြန်မာတစ်ပိုင်းဖြစ်နေတဲ့ ဒေသခံ တရုတ်များကလဲ နောက်ဝင်လာတဲ့ တရုတ်တွေ အပေါ်မှာ အမြင်ကြည်လင်မှုမရှိကြပါဘူး။ နောက်ဝင်လာတဲ့ တရုတ်တွေက အစိုးရဌာနတွေမှာ အစစအရာရာ ငွေပေးပြီးလုပ်ကြတော့ မြန်မာအစိုးရ ဝန်ထမ်းများက ဒေသခံ တရုတ် တွေကိုလဲ လာဘ်ငွေအဆမတန်တောင်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရိုးသားစွာ လုပ်ကိုင်စားရတဲ့ ဒေသခံ တရုတ်တွေကလဲ နောက် ဝင်လာတဲ့ တရုတ်တွေကို အမြင်မကြည်ကြပါ။
အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ တရုတ်ပြည်ရဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းဖို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အဓိက အသက်သွေးကြောဖြစ်တဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ဆုံမှာ ရေကာတာတည်ဆောက်မယ့် ကိစ္စကို အထူးပြုပြောဆိုလာကြပါတယ်။ ဧရာဝတီမြစ်ကြီး ပျောက်သွားနိုင်တဲ့အတွက် မြန်မာပြည်သူတွေ ကြားထဲမှာ ဒီရေကာတာကိစ္စကို အပြင်းအထန် ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်မှုတွေ များလာပါတယ်။ မြန်မာအစိုးရကို မဆန့်ကျင်ရဲတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေဟာ တရုတ်အစိုးရကို မုန်းတီးမှု ပိုမို များပြားလာပါတယ်။ ရခိုင်နဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်တွေမှာ တရုတ်ပြည်ဘက်ပို့မယ့် ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းအတွက် လယ်မြေတွေ အသိမ်းခံရတာ၊ ရွာတွေ အရွှေ့ခံရတာဆိုတဲ့ သတင်းတွေကြောင့်လည်း တရုတ်အစိုးရကို ပိုမို မုန်းတီးလာကြပါတယ်။
အခုလို တရုတ်အစိုးရကို မုန်းလို့၊ မြန်မာပြည်ထဲက တရုတ်တွေကို မုန်းလို့ဆိုတဲ့ ခံစားချက်တွေကို အသုံးချပြီး နိုင်ငံရေး ကစားဖို့ ပြင်ဆင်လာတဲ့ အုပ်စုတွေလဲ ရှိပါတယ်။ ပြည်ပအခြေစိုက်တွေဟာ လူထုကို လမ်းပေါ်တင်ချင်တဲ့အခါ တရုတ်အစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေး၊ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ဆန့်ကျင်ရေးတွေကို လှုံ့ဆော်ပြီး လမ်းပေါ်ရောက်အောင်တင်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းအခြေစိုက် နိုင်ငံရေးသမားများကလည်း ပြည်သူထောက်ခံမှုရဖို့ မြစ်ဆုံကိစ္စ၊ တရုတ်တွေ တရားမဝင် ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ကိစ္စတွေ စိစစ်ဖို့ ဆိုတာတွေ အသံလွှင့်လာကြပါတယ်။ ဒါကို စိတ်ခံစားမှုကို ဦးစားပေးတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေ ကောင်းကောင်း အသုံးချခံရဖို့ရှိပါတယ်။ အသုံးချခံရရင် တရုတ်-မြန်မာ အရေးအခင်းဟာ သေချာပေါက်ကို ဖြစ်တော့မှာပါ။ နိုင်ငံတကာမှာလဲ ဒီလို အရေးအခင်းတွေဟာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိပါတယ်။ တိုင်းပြည်ကျပ်တည်းတဲ့ တစ်နေ့ နိုင်ငံရေး ထွက်ပေါက်အနေနဲ့ ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရာ ရှိကိုရှိပါတယ်။ လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်းဖြစ်တဲ့ တိုင်းပြည်တွေဟာ တည်ငြိမ်မှုနည်းပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဆုတ်ယုတ်သွားတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ အဆိုပါ ပြဿနာတွေ ဖြစ်မလာဖို့ဆိုတာ သိမ်မွေ့နက်နဲစွာ ကိုင်တွယ်ရမယ့် ကိစ္စလည်းဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိနေတဲ့ တရုတ်လူမျိုးတွေအားလုံးကို တရုတ်ပြည်ပြန်ပို့ဖို့ဆိုတာ မလွယ်လှတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုပါ။ အချို့ဟာ နယ်စပ်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ နေထိုင်လာတဲ့အတွက် မြန်မာပိုင်နက်က တရုတ်လူမျိုးဟာ မြန်မာနိုင်ငံသား အဖြစ်သာ ရှိနေပါသေးတယ်။ တရုတ်ပြည်ကို နှင်ထုတ်ဖို့လည်း မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့ အခြေအနေပါ။ နိုင်ငံသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြု မယ်ဆိုရင်လည်း သန်းနဲ့ချီတဲ့ တရုတ်လူမျိုးတွေ လှိမ့်ဝင်လာမယ့် ပြဿနာကလဲ ရှိပြန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တရုတ် လူမျိုးတွေကို နိုင်ငံသားအဖြစ် သွတ်သွင်းဖို့ ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သစ္စာကို ဘယ်လောက်ထိ စောင့်သိရိုသေသလဲ၊ မြန်မာ လူမျိုးအဖြစ် ဘယ်လောက်ခံယူချက်ရှိသလဲဆိုတာတွေနဲ့ တိုင်းတာပြီး နိုင်ငံသားလျှောက်ထားခွင့်ပေးရပါမယ်။ နိုင်ငံသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုဖို့ လုံလောက်တဲ့ စစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်ရပါမယ်။ ဥပမာ မျိုးရိုးစဉ်ဆက်ဇယားကြည့်ခြင်း၊ မြန်မာစကားနဲ့ မြန်မာစာတတ်မြောက်မှု အကဲဖြတ်ခြင်း၊ တရုတ်လူမျိုး ကောင်းစားရေး အသင်းအဖွဲ့တွေမှာ ပါဝင်ထားခြင်းရှိမရှိ၊ မြန်မာလူမှုရေးနယ်ပယ်မှာ ပါဝင်ထားခြင်းရှိမရှိဆိုတာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအရည်အချင်းနဲ့ ပြည့်စုံသူတွေကို နိုင်ငံသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုပြီး မပြည့်စုံသူတွေကိုတော့ နေရပ်ပြန်ပို့ခြင်း၊ ဧည့်နိုင်ငံသားအဖြစ်သာ အသိအမှတ်ပြုခြင်း စသည်ဖြင့် ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Posted By AungLat
Home Page: http://tuitalk.com/
http://tuitalk.com/provisioning/end-user/zhtml/countries.zhtml (for free call details)
With Tuitalk, you can make free calls every day: Up to3free callsaday!
Make calls to: Any* of the following countries.
Make calls from: Anywhere in the world as long as you have an Internet connection andaPC oraMobile Phone.
ဆောဖ့်ဝဲကို ဒီ ( http://www.mediafire.com/?c2gxysd4f5yx8is ) မှာဒေါင်းပါ……. ဒါပေမယ့် Gtalk တို့လို သူဆီမှာ အကောင့်ဖွင့်ဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဆောဖ့်ဝဲကိုဒေါင်း အင်စတောလ် လုပ် ပြီးသွားရင် ကိုယ့် username, password နဲ့ဝင်……. ၀င်ပြီးသွားရင်တော့ သူ အလကား ပြောဖို့ ခွင့်ပြုထားတဲ့ နိုင်ငံကို သူသတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်အတိုင်းစကားပြော….. များများပြောချင်ရင် အကောင့်များများလုပ်………. အစစ အရာရာ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဖုန်းစခေါ်တာနဲ့ ကြော်ငြာဗီဒီယို ဖိုင်တခု လာပါမယ်.. အဲဒီကြော်ငြာ ပြီးတာနဲ့ သူက ကိုယ်ခေါ်လိုက်တဲ့ ဖုန်းကို ချိတ်ပေးပါလိမ့်မယ်……)
စကော်ပီယံဂိုဏ်းသားများ ပြန်လွတ် – စိုင်းဇွမ်ဆိုင်း Thursday, 18 August 2011 18:41 .
အဆက်အသွယ် ကောင်းမွန်ခြင်း၊ ဂိုဏ်းအတွင်း စည်းလုံးမှုရှိခြင်းနှင့် သြဇာ အာဏာရှိသည့် လူကြီးသားသမီးများ ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ရဲ စသည့် အာဏာပိုင်များက အရေးမယူရဲခဲ့ကြပေ။
ရန်ပိုင် Thursday, 18 August 2011 14:40 .
အဆိုပါ စီမံကိန်းသည် ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းရှိ ကျောက်မဲ၊ သီပေါ၊ ကွတ်ခိုင်၊ ပန်ဆိုင်း စသည့် ဒေသများကို ဖြတ်သန်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး ယခုအခါ ကျောက်မဲမြို့နယ်တွင် ပိုက်လိုင်းဖြတ်သန်းမည့်နေရာများ၌ ရှိနေသည့် ဥယျာဉ်ခြံမြေများအတွက် CNPC က လျော်ကြေးများ စတင်ပေးနေကြောင်း ကျောက်မဲမြို့ခံတဦးက ပြောသည်။
“ပိုက်လုံးတွေပုံဖို့ မြေငှားချင်တယ် လာပြောတယ်။ အဆောက်အဦးပါ ဆောက်မယ်။ သူတို့ပြန်ရင် အဆောက်အဦးကို ကိုယ်ပိုင်မှာပေါ့” ဟု ၄င်းမြို့ခံက ဆိုသည်။
အဆောက်အဦး ဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့် ပိုက်လုံးများ စုပုံရန် နေရာအဖြစ် မြေ ၇ ဧကအတွက် ငှားခ ၁ လလျှင် ၁၆၁ သိန်းပေးကြောင်း၊ CNPC မှ တာဝန်ရှိသူများက ဒေသတွင်းဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ပေးမည်ဟု ဆိုကြောင်း အဆိုပါဒေသခံက ဆက်ပြောသည်။
ယခု စီမံကိန်းတွင် ရေနံပိုက်လိုင်း၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းနှင့် မီးရထားလမ်းအပြင် ကားလမ်းပါ ပါရှိမည်ဟု သိရသည်။
အဆိုပါ စီမံကိန်းအရ ပိုက်လိုင်းသည် ရခိုင်ပြည်နယ် ရမ်းဗြဲကျွန်းတွင် စတင်ကာ အမ်းမြို့နယ်အတွင်းမှနေ၍ ရခိုင်ရိုးမကို ဖြတ်ကျော်မည်ဖြစ်ပြီး မကွေးတိုင်း ပွင့်ဖြူမြို့နယ်အတွင်းမှ ဧရာဝတီမြစ်ကို ဖြတ်သန်းကာ ရေနံချောင်းမြို့နယ်အတွင်း ၀င်ရောက်မည်ဖြစ်သည်။
ထိုမှတဆင့် မန္တလေးတိုင်း ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ ထိုမှတဆင့် ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်မှ မေမြို့သို့လည်းကောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ် သီပေါ၊ ကျောက်မဲ၊ လားရှိုးဒေသမှ တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ် ကူမင်းမြို့နှင့် ကွမ်ကျိုးပြည်နယ် ချုံကင်းမြို့အထိ ဖောက်လုပ်မည်ဖြစ်သည်။
မကွေးတိုင်း ရေနံချောင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ ၀က်မစွတ်၊ ညောင်ညို၊ ရေနက်ချောင်း၊ အုတ်သျှစ်ကုန်း၊ ငါးလံတာ၊ ရှားတော စသည့် ကျေးရွာများ၌ ပိုက်လိုင်းများချကာ လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်နေပြီး သီးနှံပျက်စီးမှုများနှင့် ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးမှုများ ခေတ္တ ရပ်ဆိုင်းထားရသည့် တောင်သူများကို CNPC က သီးနှံထွက်ရှိမှုအပေါ် မူတည်၍ ထိုက်တန်သည့် လျော်ကြေးပေးကြောင်း ရေနံချောင်းဒေသခံတဦးက ပြောသည်။
ပိုက်လိုင်းသည် စုစုပေါင်း ၂၈၀၆ ကီလိုမီတာ ရှည်လျားမည်ဖြစ်ပြီး ဖြတ်သန်းမည့် ဒေသတလျှောက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် CNPC က အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၆ သန်း မြန်မာအစိုးရကို ပေးအပ်ထားသည်။
သို့သော် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်မူ အလုပ်အကိုင်များနှင့် ပတ်သက်၍ ခေါင်းပုံဖြတ်မှုများ၊ အဓမ္မ လယ်မြေသိမ်းဆည်းခံရမှုများ၊ လူအခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်နေသည်ဟု ရွှေ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့မှ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ကိုဝင်းအောင်က ပြောသည်။
နယ်စပ်တွင် စက်မှုဇုန်ထောင်မည် – ဧရာဝတီ Thursday, 18 August 2011 15:14 .
နယ်စပ်ဒေသ မြို့များတွင် စက်မှုဇုန်များ တည်ထောင် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အမှတ်(၂) စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ဦးသိန်းစိုးက အင်္ဂါနေ့တွင် ပြောကြားလိုက်သည်။
လုပ်သားအင်အား အများအပြား အသုံးပြုရသော လုပ်ငန်းများကို အဓိက တည်ထောင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ကရင်ပြည်နယ်မြို့များတွင် အစပြုမည်ဟု ၀န်ကြီးက ပြောကြားသည်။
“ဘားအံ နဲ့ လှိုင်းဘွဲ့ ကြားက စက်မှုဇုန်ကို စလုပ်မယ်။ ပြီးရင် မွန်ပြည်နယ်တို့၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာ ဆက်လုပ်ဖို့ စီစဉ်မယ်” ဟု နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပသည့် စက်မှုလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ကော်မတီ၏ အစည်းအဝေးအတွင်း ၀န်ကြီးက ရှင်းပြသည်။
စက်မှုဇုန်တည်ဆောက်ရေးသည် သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ ဆင်းရဲမှု လျှော့ချရေး အစီအစဉ်များထဲမှ တခု ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
“ဒီကနေ့ မနက်က သမ္မတကြီးနဲ့ တွေ့တော့ အဲဒီ စက်မှုဇုန်ကိစ္စ တင်ပြတာ ခွင့်ပြုချက် ရခဲ့ပါတယ်။ ” ဟု ၀န်ကြီးက ပြောသည်။
စက်မှုဇုန်တခုတွင် ပါဝင်မည့် စက်ရုံ အရေအတွက်၊ အမျိုးအစား၊ အကျယ်အ၀န်း၊ တည်ဆောက်မည့်ဇုန်နေရာရှိ ဒေသခံများကို ဖယ်ရှားရေးတို့နှင့် ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ် ပြောဆိုခြင်း မရှိပေ။
တည်ဆောက်မည့် နယ်စပ် စက်မှုဇုန်များသည် ဒေသအနီး ၀န်းကျင်မှ လူများ အလုပ်အကိုင် ရရှိစေရန်၊ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ သွားရောက် အလုပ် လုပ်ကိုင်ခြင်း လျော့နည်းစေရန် တို့ကို ရည်ရွယ်သည်ဟုလည်း ၀န်ကြီးက ဆိုသည်။
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ လုပ်ငန်းရှင်တဦးက “ဌာနဆိုင်ရာက ဘယ်လို ပံ့ပိုးပေးမလဲ ဆိုတာ စောင့်ကြည့်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်သွားမယ်” ဟု ပြောသည်။
လုပ်သားများစွာ အသုံးပြုမည့် လုပ်ငန်းများဟု ဆိုသဖြင့် အထည်ချုပ် စက်ရုံ၊ အီလက်ထရွန်နစ် ပစ္စည်း တပ်ဆင်သည့်စက်ရုံတို့ အများစု ပါဝင်ဖွယ် ရှိကြောင်း စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များက သုံးသပ်နေကြသည်။
ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် တနင်္သာရီတိုင်းအတွင်း တည်ဆောက်နေသည့် ထားဝယ် ရေနက်ဆိပ်ကမ်း စီမံကိန်းတွင်လည်း စက်မှုဇုန်များပါဝင်သည်ဟု သိရသည်။
By ဗွီအိုအေ (မြန်မာဌာန) – ကြာသပတေး, 18 သြဂုတ် 2011
Thursday, 18 August 2011 01:46 မောက္ခနိုင်ငံတကာသတင်း
ဟာဇရီ က အဂတိလိုက်စားမှု အဆုံးသတ်ပစ်ဖို့နဲ့ ကောင်းရာမွန်ရာလုပ်ဖို့ ငြင်းဆန်နေတဲ့ အစိုးရကို ၀ိုင်းဝန်း ဆန့်ကျင်ကြဖို့အတွက်၊ သူ့ရဲ့ ကမ်ပိန်းကို အိန္ဒိယရဲ့ ‘ဒုတိယ လွတ်လပ်ရေး’ လှုပ်ရှားမှုဟု ကြေငြာခဲ့သည်။
နောက် သူက ဗြိတိသျှ အစိုးရကို ဆန့်ကျင်ရာမှာ ဂန္ဒီကြီး အသုံးပြုခဲ့တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ‘ဂျေးလ် ဘာရို’ ခေါ် ဥပုသ်စောင့်ပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြမှုကို ကျင့်သုံးခဲ့သည်။ ဆန္ဒပြ အဖမ်းခံခြင်းဖြင့် အိန္ဒိယ အကျဉ်းထောင်များကို လူထပ်ဖြည့်ဖို့ စည်းရုံးလှုံဆော်တဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
By ဗွီအိုအေ (မြန်မာဌာန) – ဗုဒ္ဓဟူး, 17 သြဂုတ် 2011
အီသီယိုးပီးယား ဒုက္ခသည်စခန်း တခုမှာ ထိတ်လန့်စရာ ကောင်းလောက်တဲ့နှုန်းနဲ့ ဆိုမာလီ ဒုက္ခသည် ကလေးငယ်တွေ သေဆုံးနေကြတယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များ မဟာမင်းကြီးရုံးက ပြောပါတယ်။
အီသီယိုးပီးယား အရှေ့ပိုင်းက ကိုဘေ (Kobe) ဒုက္ခသည်စခန်းမှာ အသက် ၅ နှစ်အရွယ်အောက် ပျမ်းမျှ ကလေး ၁၀ ယောက် တနေ့တနေ့ သေနေကြတယ်လို့ အစီရင်ခံစာမှာ ဆိုပါတယ်။ အာဟာရ ချို့တဲ့တာက သေရတဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းဖြစ်ပြီး ၀က်သက်ရောဂါ ပျံ့နှံ့နေတာကလည်း ပြဿနာကို ပိုဆိုးသွားစေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဆိုမာလီတောင်ပိုင်း ဒေသ ၅ ခုကို ဒုဗ္ဘိကန္တရကပ် ဆိုက်နေတဲ့ ဒေသတွေအဖြစ် ကုလသမဂ္ဂက ကြေညာထားပါတယ်။ လာမယ့်လ ကုန်တာနဲ့ တောင်ပိုင်း တပိုင်းလုံး အငတ်ဘေး ဆိုက်သွားမယ်လို့လည်း ဟောကိန်းထုတ်ထားပါတယ်။
အရေးပေါ် ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းတွေကို မလုပ်ဘူးဆိုရင် ဆိုမာလီ ကလေး ၄၀၀,၀၀၀ အထိ အငတ်ဘေးနဲ့ သေနိုင်တယ်လို့ ဗြိတိန် နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာန အတွင်းဝန် အန်ဒရူး မစ်ရှဲလ် (Andrew Mitchell) က ဆိုပါတယ်။ ဗြိတိန်က နောက်ထပ် ဒေါ်လာ ၄၁ သန်း အကူအညီ ပေးမယ်လို့ ကတိပေးလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာသတင်းထောက် ဆုပေးရေး ကော်မတီ ဖွဲ့စည်း
By ဦးကျော်ထင် – ကြာသပတေး, 18 သြဂုတ် 2011
နှစ်စဉ်ချီးမြှင့်သွားမယ့် အမျိုးသားအဆင့် အကောင်းဆုံး သတင်းဆု အပါအ၀င် တခြားဆုတွေအတွက် ဆုရွေးချယ်ရေး ကော်မတီတရပ်ကို မြန်မာနိုင်ငံ စာပေနဲ့ စာနယ်ဇင်းအဖွဲ့ အပါအ၀င် လွတ်လပ်တဲ့ သတင်းစာ ဆရာကြီးတွေ၊ စာပေစိစစ်ရေးအဖွဲ့က တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ ဒီကနေ့ ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။ လောလောဆယ်တော့ ဒီကော်မတီက ဘယ်လိုမူဝါဒတွေနဲ့ ဆုတွေကို ရွေးချယ်ပေးသွားမယ် ဆိုတာကို ကွဲကွဲပြားပြား မသိရသေးပါဘူး။ အပြည့်အစုံကို စုံစမ်းထားတဲ့ ဗွီအိုအေ ထိုင်းအခြေစိုက် သတင်းထောက် ကိုကျော်ထင်က တင်ပြထားပါတယ်။
စာပေလွတ်လပ်ခွင့် အဆိုးဆုံးနိုင်ငံ စာရင်းဝင်လို့ လူသိများတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ သတင်းနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ ဆုတွေ ပေးမယ့် အစီအစဉ်ဟာ အခုတကြိမ် ပထမဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ဆုရွေးချယ်ရေး ကော်မတီကို ဒီကနေ့မှာပဲ ဖွဲ့စည်းလိုက်တာပါ။
ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ သတင်းစာဆရာကြီး မောင်ဝံသက ဆုတွေအပေါ် မူတည်ပြီး သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် ဘယ်လောက်ရှိမယ်ဆိုတာ တိုင်းတာဖို့ လိုတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီအခွင့်အရေး ဆိုတာကတော့ အစိုးရက သီးခြားပေးတဲ့ဆုမျိုး မဟုတ်ဘူးလေ။ ကျနော်တို့က အမျိုးသား သတင်းဆု ကော်မတီဆိုပြီး ဖွဲ့တယ်၊ ရန်ပုံငွေလည်း ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ရှာကြမယ်။ ဆုကိုလည်း ထိုက်ထိုက်တန်တန် ပေးမယ်ဆိုတော့ ကျနော်တို့က ပေးတဲ့ သတင်းဆုရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက ဘာပဲပြောပြော အဲဒီ ထိုက်တန်တဲ့ သတင်းမျိုးပေါ့ဗျာ၊ တိုင်းပြည်က လက်ခံတဲ့ သတင်းရေးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲ ရမှာပဲ။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ပေးတဲ့ ဆုတွေမှာ ကြည့်ပြီးတော့မှ ကျနော်တို့ရဲ့ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် အခြေအနေ၊ အတိုင်းအတာကို လေ့လာလို့ရမယ် ထင်ပါတယ်။”
အစိုးရသစ် တက်လာချိန်ကစပြီး စာပေစိစစ်ရေး မူဝါဒတချို့ ပြောင်းလဲတာတွေ၊ စာနယ်ဇင်းကဏ္ဍကို စတုတ္ထမဏ္ဍိုင် အနေနဲ့ အလေးအနက် ထားရမယ်လို့လည်း အစိုးရသစ်က ပြောဆိုလာတာပါ။ အခုဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ ကော်မတီမှာ နာမည်ဆိုးနဲ့ ကျော်ကြားတဲ့ စာပေစိစစ်ရေးက တာဝန်ရှိသူတချို့ ပါဝင်နေပေမဲ့ အစိုးရနဲ့ တိုက်ရိုက် မပတ်သက်ဘူးလို့ ဆရာ မောင်ဝံသက ဆိုပါတယ်။
“စာပေစိစစ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူတို့ တာဝန်အရ ပါတာတော့ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ စာပေစိစစ်ရေးက ဒု-ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးတင့်ဆွေ၊ ကလောင်နာမည် ရဲရင့်တင့်ဆွေ၊ နောက်တခါ အခုလက်ရှိ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမျိုးမြင့်မောင်၊ မျိုးမြတ်မြတ်မြင့်မောင် ဆိုပြီး ကဗျာတွေ၊ စာတွေလည်း ရေးပါတယ်။ သူတို့ကိုတော့ အမှုဆောင်ထဲမှာ ထည့်ထားတယ်။ ကျနော်တို့ ကော်မတီ လုပ်ငန်းတွေ လုပ်တဲ့အခါ သူတို့လည်း တွဲသိကြမှာပေါ့လေ။ တခါတည်း သိသွားအောင် ဆိုပြီးတော့၊ ဒါပေမဲ့ စာပေစိစစ်ရေးရဲ့ ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်နဲ့ ပါတာ မဟုတ်ပါဘူး။”
ဆုတွေအတွက် အရည်အသွေး သတ်မှတ်ချက်နဲ့ ပတ်သက်လို့ တိကျတဲ့ စံချိန်စံညွှန်းတွေ မရှိသေးပေမဲ့ ၀ါရင့် စာနယ်ဇင်း သမားကြီးတွေ၊ ပညာရှင်တွေကို သတင်းဆု စိစစ်ရွေးချယ်ပေးဖို့အတွက် အကူအညီ တောင်းခံမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဆုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ဟာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဆုံးဖြတ်နိုင်မယ်လို့ ကော်မတီက ယုံကြည်နေပါတယ်။
ကော်မတီဖွဲ့တဲ့ အဆင့်ပဲ ရှိတာမို့ ဆုရွေးချယ်ရေး မူဝါဒတွေကို မသတ်မှတ်ရသေးဘူးလို့ မြန်မာနိုင်ငံ စာပေနဲ့ စာနယ်ဇင်းအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဦးကိုကိုက ဆိုပါတယ်။
“ဆုရွေးချယ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ အမျိုးသား သတင်းဆု စိစစ်ရွေးချယ်ရေး အဖွဲ့တရပ်ကို ၀ါရင့် စာနယ်ဇင်း ပညာရှင်ကြီးများနှင့် ဖွဲ့စည်းရန် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ကျနော်တို့ ဖွဲ့စည်းပြီး ဆောင်ရွက်မှာ၊ Independent သတင်းစာ ဆရာကြီးတွေနဲ့ စိစစ် ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့မှာ။ ခင်ဗျားပြောတဲ့ ဆုတွေ ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေ လာမလဲ၊ ဘာဆုတွေ ပါမလဲ၊ ဘယ်လိုမူနဲ့ ရွေးမလဲ ဆိုတာကတော့ ဒီနေ့မှ ကျနော်တို့ ကော်မတီ ဖွဲ့တာဗျ။ ကော်မတီက ထပ်ပြီးတော့ ဆွေးနွေးမှာ။”
ဆုတွေကတော့ သတင်းဆု၊ သတင်းဆောင်းပါးဆု၊ အာဘော်ဆောင်းပါးဆု၊ သတင်းဓာတ်ပုံဆုနဲ့ သတင်းကာတွန်းဆုတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆုတွေ ချီးမြှင့်မယ် ဆိုပေမဲ့ ရွေးချယ်မယ့် မူဝါဒရှိဖို့ လိုတယ်လို့ ပြည်တွင်း သတင်းအယ်ဒီတာ တယောက်က ဆိုပါတယ်။
“လုပ်ပေးတာတော့ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီဟာက မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ ရွေးပေးဖို့ရယ်၊ နောက် ဘယ်လိုစံတွေနဲ့ ရွေးပေးမလဲ၊ အဲဒီဟာတွေ သတ်မှတ်ပြီးတော့ ဒါတွေကို ထုတ်ပြန်ပေးသင့်တယ်လို့ ကျနော် ထင်တယ်လေ။ အဲဒီလိုမဟုတ်ပဲ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မကျတဲ့ အခါကျတော့ ဘယ်လိုစံနဲ့ ရွေးမှန်း၊ ဘာကြောင့်ရွေးမှန်း မသိရဘဲနဲ့တော့ ဒီဟာကြီးက။”
စောစောပိုင်းကတော့ ဦးကျော်ရင်မြင့်၊ ဦးရဲနိုင်မိုး အပါအ၀င် စာနယ်ဇင်းသမား တချို့က အလားတူ ဆုချီးမြှင့်မယ့် အစီအစဉ်တွေ ရှိခဲ့ပေမဲ့ စာပေစိစစ်ရေးကပါ ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်လိုတဲ့အတွက် အစီအစဉ် ပျက်သွားခဲ့ပါတယ်။
အခု ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ ကော်မတီဟာ စာနယ်ဇင်းသမားတွေရဲ့ အခွင့်အရေးနဲ့ စာနယ်ဇင်း ကျင့်ဝတ်တွေအတွက် တိကျ သတ်မှတ်တဲ့ ဥပဒေတွေ ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ဖို့လည်း လွှတ်တော် အဆင့်ဆင့်က တင်ပြ ပြောဆိုသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
သမ္မတ မိန့်ခွန်းအပေါ် ပြည်သူတယောက်ရဲ့ အမြင်
(မျိုးသက်ပိုင်၏ ဖေ့စ်ဘုတ်မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်)
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ပြန်လာနိုင်ပါတယ်..။ ခွင့်လွတ်ပါတယ်..။ သို့ပေမယ့် ကျူးလွန်ခဲ့ဖူးတဲ့ အမှုတွေအတွက်တော့ ထိုက်သင့်တဲ့ ပြစ်ဒဏ်ကို ခံရမယ်..။ အမှုသေးရင်တော့ စဉ်းစားပေးမယ်ပြောတော့ ကျွန်တော့အမြင်အရတော့ ဒါကလည်း အစိုးရတစ်ရပ်အနေနဲ့ မလုပ်မဖြစ်၊ မပြောမဖြစ်မို့ ပြောရတာလားပဲ..။
ဈေးဆစ်သန်တဲ့ လူမျိုးမို့ လားတော့ မသိဘူး..အသံတွေ ဘက်ပေါင်းစုံကနေ ထွက်လာကြတယ်..။ သို့ပေမယ့် ထောက်ပြတဲ့အချက်ကလည်း လူ ၂၀၀၀ ကျော်ကိစ္စဆိုတော့ လက်ခံနိုင်လောက်တဲ့ အချက်ပဲလို့ တွေးမိတယ်..။ တကယ်ပြန်လာရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့.. အတိုင်းအထက်အလွန်ပဲလေ..။ သို့ပေမယ့် အိမ်ထမင်းဟင်းမေ့လို့မှပဲ ခုနေပြန်လာတော့ရော၊ သူတို့နေခဲ့တဲ့ ဘတ်စုံခေတ်မှီဖွံဖြိုးတိုးတက်နေတဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကြီးများနဲ့တော့ နှိုင်းမရဘူးပေါ့လေ..။ ဒီမှာကခုထိ မြောင်းရေလျှံတုန်း ဆိုတော့..။ အနည်းဆုံးတော့ နယ်စပ်က ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ တကယ်ကိုဒုက္ခခံနေရတဲ့ တိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေ အတွက်တော့မျှော်လင့်ချက်လေး ဖြစ်လာမယ်လို့ ယူဆတာပဲ..။ သူတို့တွေကနေ စပြီး ရွှေလမ်းငွေလမ်းဖောက်ရင် သင့်မယ်လို့ ထင်တာပဲဗျ..။
အခွန်တွေလည်း လျှော့ခဲ့တယ်..။ ထပ်လျှော့ပေးတယ်..။ နောက်ကိုလည်း လျှော့သင့်တဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေအတွက် လျှော့ပေးမယ်လို့ ပြောတာတွေဟာ နောက်များကျပြီလားပြောချင်တယ်..။ အဘက်ဘက်က နာပြီးရင်းနာနေတဲ့ ပို့ကုန် ကဏ္ဍအတွက်တော့ ဒီအချိန်မှ အခွန်တွေလျော့ပေးတာဟာ သေခါနီးလူမမာကို ဒန်ပေါက်လေးတော့ စားသွားပါဦး ဆိုပြီး စေတနာတွေ ထားပြနေတာနဲ့များ တူနေသလိုလို…။ ဒါပေမယ့် ဒါကမျှော်လင့်မထားရဲခဲ့တဲ့ အပြောင်းအလဲလို့တော့ ၀န်ခံချင်သား..။
နောက်ပြီး ဒေါ်လာဈေးသတ်မှတ်ရေးမှာလည်း အစိုးရအနေနဲ့ တကယ်ကို ရောင်းဝယ်ရာမှာ တာဝန်ခံနိုင်တဲ့ ဈေးနှုန်းဖြစ်ဖို့ကို မျှော်လင့်ကြတယ်..။ တစ်ဒေါ်လာ ၈၀၀/ ၈၅၀ ဆိုတာ မရိုင်းပေမယ့် သိပ်အယဉ်ကြီးတော့လည်း မဟုတ်ဘူးမလား..။ ဒီထက်ပိုနိုင်လေ ကောင်းလေပဲလို့ သဘောရပါတယ်..။ ငွေဆိုတာကြီးက မလိုအပ်ပဲ မာနေရင် လုပ်ရကိုင်ရခက်တယ်ဆိုတာ အားလုံးအသိပါလေ..။
နောက်တစ်ချက်က ခုရေဘေးသင့် ဒေသတွေက လယ်သမားတွေကို ထုတ်ချေးငွေ ၂၀၀၀၀ ကနေ နှစ်ဆတက်ပြီး ၄၀၀၀၀ တင်လိုက်တာကိုလည်း ပြောရှာတယ်..။ မြေဆီ (ဓါတ်မြေသြဇာ) တစ်အိတ်ဘယ်ဈေးပေါက်လဲ ဆိုတာအရင် စုံစမ်းရင်တောင် သိပ်ပျော်စရာမရှိလှဘူးမှတ်တာပဲ..။ ဒီအတွက်လည်း နောက်နှစ်တွေမှာ ဆန်စပါးအသင်းဖွဲ့ပြီး အစိုးရနဲ့ half by half စပါးကို ဈေးပေးဝယ်မယ်လို့ ပြောပါတယ်..။ အရံဆန်အနေနဲ့ ထားမယ်လို့ပြောပါတယ်..။ ဒီလိုပုံစံဟာ အဆုံးရှုံး အလေလွင့်များလွန်းတဲ့ ကုန်သွယ်ရေးခေတ်တစ်ခေတ်ကို ပြန်ထူထောင်တာနဲ့တူနေ သလိုလို..။ နားလည်သလောက်၊ ကြုံဖူးသလောက်တော့ ဘယ်စီးပွား၊ ကုန်သွယ်ရေး ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အစိုးရ ၀င်ပါတာနဲ့ ဂွမ်း တာပဲဗျ..။ (ပြောရတာတော့ အားနာလှတယ်)
ဒီကြားထဲမယ် ကပ်လျက်နေတဲ့ ဘေးထိုင်းပြည်က ၀န်ကြီးချုပ်အသစ် လုံးကြီးပေါက်လှ အန်တီလေး ယဉ်လခ်ကတော့ ဆန်စပါးတွေကို တိုက်ရိုက်ပဲ ဈေးမြင့်ထားဝယ်မယ် ဆိုပြီး ပုံစံပြောင်းကိုင်တာလေးကို လေ့လာကြည့်တော့ အတော်ပဲ သဘောကျစရာဗျ..။ ဒီမှာလို တင်းတစ်ရာထွက်ရင် ဘယ်ဈေးပေးပါ့မယ် ဆိုတာမျိုး၊ ထုပ်ချေးငွေတွေကို စပါးဈေးနဲ့ ပြန်ခုနှိမ်ပြီး ချေမယ် ဆိုတာမျိုးတွေ မဟုတ်ဘူး..။ သူ့နည်းက ကြားခံအဆင့်ဆင့်လည်း မလိုသလို၊ အဲ့ဒီအဆင့်ဆင့်သော အဆင့်ဆင့်တွေရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်နဲ့ ဘတ်ကီးထုတာတွေကိုလည်း ကာဗာပေးပြီးဖြစ်နေတာကို တွေ့ရတယ်..။ တစ်တင်းထွက်ရင် တစ်တင်းစာ၊ တင်းတစ်ရာထွက်ရင် တင်းတစ်ရာစာ အကျိုးခံစားခွင့် တိုက်ရိုက်ရရှိမယ် ဆိုတဲ့ပုံမျိုးဗျ..။ ပြီးတော့ ထိုင်းဘတ်ဈေးကိုလည်း ဈေးချဖို့လုပ်တယ်ဆိုတာကြောင့် ကျုပ်တို့နဲ့များ ပြောင်ပြန်ဆိုပြီး အံသြယူရပါသေးတယ်..။ ခုတော့ ကမ္ဘာ့ဆန်ဈေးပါ အထိုက်အလျောက် မြင့်တက်လာတာ ကြောင့် မြန်မာ့ဆန်လည်း ရောင်းအားလေးနဲနဲ အတက်ပြလာတာကို တွေ့ရပါတယ်..။
ဘာပြောပြောပေါ့လေ..။ ထွက်စာတင်တယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်လာပြီး နောက်ပိုင်းမှာမှ ဒေါ်စုနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာလေး စိတ်လာတယ်..။ ကြေညာချက်တွေ ထုတ်ပြန်တာလည်း ရှိလာတယ်..။ ခရီးထွက်တော့လည်း အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ ပြီးပြတ်တယ်..။ လက်နက်ကိုင်တွေနဲ့သဘောထားမှာလည်း ပျော့ပြောင်းတန်သလောက် ပျော့ထားပေးတာတွေလည်း မြင်ရတယ်..။ နောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီး နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲက သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ အခွန် ၁၀% ကို အခု နိုင်ငံတော် သမ္မတက ၂% ထိ ပြန်ဖြည်လျှော့ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ နည်းနည်းတော့ တွေးစရာ ဖြစ်လာသလားပဲဗျ..။ ဒီလိုပဲ လမ်းဘေးဈေးသည်ကယ်တင်ရေးနဲ့ ဧရာဝတီကယ်တင်ရေးတို့မှာလည်း မထင်ထားတဲ့ အပြောင်းအလဲလေးတွေများ ရလာမလားလို့…. ထုံစံအတိုင်း…. မျှော်လင့်ရတာပါပဲဗျာ….။
မောင်ကောင်း says: August 18, 2011 9:23 PM
လက်ရှိအသစ်တက်လာတဲ့ အဟောင်းအမြင်းသမ္မတအသစ်နဲ့အစိုးရကို အမျိုးမျိုးသောအကောင်းမြင်ဝါဒရှု့ဒေါင့်ကနေကြည့်ပါတယ်ဘယ်လိုမှကောင်းလာဖို့ ဖြစ်မယ်မထင်ပါဘူး အဓိကပြဿနာကပန်းရံကျွမ်းကျင်သူကို ပန်းတိမ်သွားလုပ်ခိုင်းလို့မရပါဘူး ထိုနည်း၎င်းပဲ တိုင်းပြည်ကြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုတာ အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်တွေအလုပ်ပါ စစ်တပ်က ဘာမှမသိပဲလုပ်ချင်တာဝင်ဝင်လုပ်နေတော့ ဂွမ်းကုန်တာပေါ့ ၊ အခုတမျိုးပြောင်းလာတာကျပြန်တော့ ဘေးနားမှာအကြံပေးထားပြီး ပညာရှင်ထားပြီး လုပ်ကြည့်စမ်းကြည့်နေပြန်ပါသေးတယ် ဒါလဲပဲဖြစ်လာမယ်မထင်ပါဘူး အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်တွေရဲ့ သဘောကိုက လွတ်လပ်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးကိုပေးရပါမယ် ကြိုးကိုင်ထားလို့လဲမရပါဘူး၊ ပြည်သူတွေက ၃လကျော်ပြီ ဘာမှမဖြစ်သေးဘူးလို့ ထ အော်တော့မှ တွေ့ဆုံပွဲတွေ ရှင်းလင်းပွဲတွေ ကပေါက်တိကပေါက်ချနဲ့ ထလုပ်ကုန်တာလို့ပဲမြင်ပါတယ်၊ အဓိက ကတော့ ဗျာ တကယ်စေတနာရှိရင် ရင်ဘတ်ကြီးထဲမှာ ရှင်းနေကြဖို့လိုပါတယ်။
By မသင်းသီရိ – ကြာသပတေး, 18 သြဂုတ် 2011
လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်လုပ်ရမဲ့အလုပ်တွေကို ပြည်သူတွေစိတ်ကျေနပ်အောင် စတိသဘောမျိုးလေးတွေ လုပ်ပြနေတာနဲ့တူပါတယ်….။
မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားက ဒီည ၈း၀၀ နာရီမှာ ထုတ်လွှင့်သွားတဲ့ နေပြည်တော်က အံ့အားသင့်စရာ တွေ့ဆုံပွဲကို ကူးယူ မှတ်တမ်းတင်ထားတာပါ။ နံရံမှာ ချိတ်ထားတဲ့ပုံက ခေါင်းပေါင်း၊ တိုက်ပုံ ၀တ်ဆင်ထားတဲ့ ဦးအောင်ဆန်းရဲ့ဓာတ်ပုံ ဖြစ်နေတာကတော့ ဒီကနေ့အတွက် ဒုတိယမြောက် အံ့အားသင့်မှု ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
email နဲ့ ရောက်လာတဲ့ စာတစောင်ကို ကူးယူ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ. သမ္မတဦးသိန်းစိန် တွေ.ပြီး နက်ဖန် နေပြည် တော် စီးပွားရေးဖိုရမ်တက်မည်
ဒီနေ. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ. ဦးသိန်းစိန် ၁ နာရီနီးပါး နေပြည်တော် သမ္မတအိမ်တော်မှာ တွေ.ဆုံခဲ.ပါတယ်။ ဦးသိန်းစိန်နဲ.အတူ သမ္မတကတော်ရယ် သမ္မတရုံးအဖွဲ.ညွှန်ကြားရေးမှူးတို.လည်း တွေ.ဆုံပွဲမှာရှိတယ် ဆွေးနွေးပွဲကနွေးနွေးထွေးရှိတယ်လို.သိရပါတယ်။ MRTV က ဒီသတင်းကို ထုတ်လွှင်.တော. “မတူတာတွေဖယ်ပြီး တူတာတွေကို ဘုံအကျိုးစီးပွားအတွက် တွဲပြီး လုပ်ဆောင်သွားမယ်လို.” ကြေညာသွားပါတယ်။
ဒေါ်စုကနေပြည်တော်မှာ လှည်.ကြည်.တယ် ဆိုတဲ. သတင်းကတော.မမှန်ပါဘူး၊ ဒီညနေပြည်တော်မှာ အိပ်ပြီး နက်ဖန် နေပြည်တော်စီးပွားရေးဖိုရမ်ကို ခနတက်မယ် လို. သိရပါတယ်”
“A preemptive strike would be particular likely in the early phases of our expansion becauseacivilisation may become increasingly difficult to destroy as it continues to expand,” the researchers suggest, according to The Guardian.
“Humanity may just now be entering the period in which its rapid civilisational expansion could be detected by an [alien race] because our expansion is changing the composition of Earth’s atmosphere, via greenhouse gas emissions.
“‘Green’ aliens might object to the environmental damage humans have caused on Earth and wipe us out to save the planet,” the report continues. “These scenarios give us reason to limit our growth and reduce out impact on global ecosystems.”
မဇ္ဈိမသတင်းဌာန | တနင်္လာနေ့၊ သြဂုတ်လ ၂၂ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၁၃ မိနစ်
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့်ကို ရှေးရှု့သည့် ခြေလှမ်းတရပ်အနေဖြင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ
သူရ ဦးရွှေမန်းက သတင်းမီဒီယာများ၏ ဝေဖန်အကြံပြုမှုကို ခံယူသွားမှာဖြစ်ကြောင်း တနင်္လာနေ့က ပြောကြား သွားသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၏ ဒုတိယအကြိမ် ပုံမှန် အစည်းအဝေး အဖွင့် မိန့်ခွန်းတွင် သူရဦးရွှေမန်းက “သတင်းမီဒီယာများ အပါအဝင် အများပြည်သူများနှင့် နိုင်ငံတကာမှ ဝေဖန် အကြံပြုမှုများကိုလည်း မိမိတို့ ခံယူသွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ထည့်သွင်း ပြောကြားသွားသည်။
ပထမအကြိမ် ပုံမှန် အစည်းအဝေးတွင် သတင်းထောက်များ တက်ရောက် သတင်းယူခွင့် မပြုသော်လည်း ယနေ့တွင် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပသတင်းဌာနများမှ သတင်းထောက် ၅၀ ကျော် တက်ရောက် သတင်းယူနိုင်ခဲ့သည်။
ထို့အပြင် လွှတ်တော်၏ အခန်းကဏ္ဍကို ခိုင်မာတောင့်တင်းအောင် အထူးအလေးထား ပြောကြားသွားရာတွင်
“ အတိတ်က သင်ခန်းစာများကို ရယူပြီး ယနေ့ မျက်မှောက်ကာလမှာ ဆောင်ရွက်သင့်တဲ့ ကိစ္စများကို မိမိတို့ အားလုံးက ရဲရဲဝံ့ဝံ့၊ သတ္တိရှိရှိ၊ ညီညီညွတ်ညွတ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောကြားသွားသည်။
အရပ်ဝတ်လဲ စစ်ဘက်အရာရှိဟောင်းများ အကြား ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး လိုလားသူ တဦးအဖြစ် ရှု့မြင်ခံရသူ သူရဦးရွှေမန်းက လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များကိုလည်း အရည်အချင်း တိုးတက် မြင့်မားအောင် လေ့ကျင့်နေဖို့ လိုသည်ဟု ပြောသွားသည်။
“ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ အနေဖြင့် ပြည်သူ့အသံ၊ ပြည်သူ့ဆန္ဒ၊ ပြည်သူ့သဘောထားနှင့် ပြည်သူ့
မျှော်လင့်ချက်များကို အလေးထား ဆန်းစစ် သုံးသပ်ဝေဖန်ပြီး လက်တွေ့ နယ်ပယ်တွင် ပြည်သူ့ အကျိုးအတွက်
နိုင်ငံတော် အကျိုးအတွက် ဖြစ်ထွန်းစေမည့် ဥပဒေများ အမြန်ပေါ်ထွန်းရေးနှင့် ထိုဥပဒေများနှင့် အညီ နိုင်ငံသား အားလုံးနှင့် အဖွဲ့အစည်း အားလုံးက လိုက်နာ ကျင့်သုံးရေး အတွက် ထိန်းညှိ ကူညီဆောင်ရွက်ရန် လွှတ်တော်တွင် တာဝန်ရှိပါတယ်” ဟု ပြောကြားသွားသည်။
ယနေ့ အစည်းအဝေးသို့ အမတ် ၃၈၉ ဦးတက်ရောက်ပြီး လွှတ်တော် ကျင်းပမည့် ကာလကို သုံးပတ်မှ လေးပတ်
ဝေဖန်မှုကို ခံယူမယ်လို့ပဲပြောတာပါ၊ ပြန်မချဘူးလို့ ပြောမထားဘူးနော်။ သတိထားအုံး သဂျီး။ တော်ကြာနေ ဗိုလ်ရွှေမန်းက လူလွှတ်ပြီး ဆော်ပလော်တီးခိုင်းနေအုံးမယ်…
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေ.. ဒီအတိုင်းဆက်သွားရင်.. ဆန်ရှင်(စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု) လွတ်(လျှော့ချ)သွားနိုင်တာမို့.. အနောက်နိုင်ငံတွေက.. ရင်းနှီးမြုတ်နှံမှု ဒေါ်လာ.. ဘီလီယန်ချီဝင်လာမယ်ထင်ပါတယ်..။ လုပ်ကွက်ကောင်းတွေ.. အများကြီးရှိနေတဲ့ နိုင်ငံကိုး..။
ဗမာငွေနဲ့..လဲရင်.ဒေါ်လာပိုရနေတာမို့.. အင်ပို့..(သွင်းကုန်)တွေတိုးတက်သွားမယ်ဖြစ်ပြီး.. အဲဒီအထဲ.. အနာဂါတ်မှာ..အလုပ်လုပ်ပေးမဲ့.. အလုပ်တွေဖန်တီးပေးမဲ့.. တန်ဖိုးရှိတဲ့.. စက်ကရိယာတွေ..ငွေပိုသုံးပြီး နိုင်ငံခြားက၀ယ်သင့်တယ် ထင်မိပါတယ်..။
လောလောဆယ်.. ခေါင်းကိုက်နေသူက.. မန္တလေးဂေဇက်အက်မင်..သူကြီးဖြစ်နေပါကြောင်း..။
( ပွိုင့်ပေးစံနစ်ပြင်ဖို့.. ချိန်ဆနေပါကြောင်း..)
ဒီဘက် Media တွေက စီးပွားရေး ပညာရှင် ———— လို့ မှားသုံးနေကြတာ ထောက်ပြမဲ့လူရှိရင် သီတ်ကောင်းမှာ စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာတွေကိုရေးနေလို့ စီးပွားရေးပညာရှင် လို့ တတ်ပေးလိုက်တာလားမသိ
လိုအပ်တာတွေကို စားပေါက်ချောင်တဲ့ ( ကိုကြောင်ကြီးတို့လို သဌေးသမီး ဖွားလေးဆူးတို့ စသည် စသည် )
သူတွေက လျှော့လျှော့ပေါ့ပေါ့ ဆောင်ရွက်ပေး
( ပွိုင့်မယူခြင်း အိပ်စိုက်၍ ပွိုင့်လှူခြင်း ကော်ပီများကို ဖြတ်နှုတ်ခြင်း) တွေကို စောင်ရွက်ကြတာပေါ့
ကိုယ်လည်းနည်းနည်းပါးပါး ( စတိလောက် ) ပါဝင်ရသေးတာပ
( ပြောလို့သာပြောရတာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို မလွှတ်ဘဲ ဆန်ရှင်ဖွင့်တာရရှိဘို့လောက်ကို
ဟန်ရေးပြပြီးလုပ်ပြနေတာတွေကို လက်တစ်လုံးခြား ပို့စ်တွေတင်ပြီး လာထောက်ခံနေရင်တော့
ဟင်းဟင်းဟင်း ဂရူးဂရား ဂွီးဂီးဂီး သွားများကို အစွမ်းကုန်ဖြဲ၍ပြောသည် လင်ဝှေ့ယိမ်းထိုး၍ ပြောသည်
အိုးခွက်ပုဂံများကို ပေါက်ခွဲ၍ ပြောသည် )
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလွတ်ပေးပါ မပြောပဲ.. လွှတ်ပေးရမဲ့..သူ..နာမယ်တွေတတ်ပြီးအော်ကြ.. ပြောကြ..လုပ်ရမယ်ထင်မိတယ်..။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်… ဒီအတိုင်းဆက်သွားရင်.. မကြာခင်လွတ်ပေးမယ်လည်း ထင်တာပဲ..။
ဆန်ရှင်ကိစ္စက.. မကြာခင်သွားမယ့်.. ယူအက်စ်အင်န်ဘွိုင်းနဲ့.. ဆိုင်မယ်..။
ဒီအချိန်က..မြန်မာပြည်အစိုးရသစ်ဘာလုပ်နေတာလည်းဆိုတာကို… . သူတို့တွေ..သေသေချာချာ စောင့်ကြည့်နေတာပဲ..။
သတင်းတွေက ဖတ်ချင်ပေမယ့် အင်္ဂလိပ်စာ အားနည်းတော့ သိတာလေးတွေ ရမ်းသမ်း ဘာသာပြန်နေရတယ်…
ဒါနဲ့ သဂျီးရေ… ဒီမှာပဲ အော်ခဲ့တော့မယ်နော့။
မနော ပိုစ့်တစ်ခုက ကွန့်မတ်အော့ဖြစ်နေလို့ပါ ပြန်ပြင်ပေးပါဦးရှင့်။
Forward ကိစ္စ တစ်စခန်းထမည်ဆိုးပါသည် …
တစ်ချို့ပို့စ်များတွင် တွေ့ရပါသည် …
ကျုပ်ကတော့ ရွာပြင်မှာပဲ ရွာလည်နေတယ် … :D
US special envoy seeks early travel to Myanmar
2011-08-24 02:20 AM
A new U.S. special envoy to Myanmar has taken office and wants to travel there at the earliest opportunity.
The envoy Derek Mitchell is charged with pushing for reform by Myanmar’s military-dominated government whose president last week met with pro-democracy leader Aung San Suu Kyi,amove welcomed by Washington.
State Department spokeswoman Victoria Nuland toldanews conference Tuesday that the U.S. will be talking to Myanmar’s government in the coming days about how quickly Mitchell will be able to travel to the country.
Mitchell is the first person to hold the special envoy position, created in 2008 inamove that also beefed up sanctions.
BURMA RELATED NEWS – AUGUST 23, 2011
AFP – UN envoy attends Myanmar parliament
Reuters/AlertNet – Invisible millions pay price of statelessness
IRIN – MYANMAR: Dire conditions for IDPs in Kachin as tension mounts
Asian Correspondent – Opinion: Burma needs genuine political change
Asian Correspondent – Does Burma’s president really know what the people want?
Việt Nam News – Viet Nam eyes Myanmar opportunities
Gulf Times – Myanmar leader tells parliamentarians ‘ready to work with world community’
Sin Chew Jit Poh – UN chief urges Myanmar to step up reforms
UPI – Ban encouraged by Myanmar meeting
UPI – Myanmar rebels reject peace call
VOA News – Burmese Government Reaches Out to Critics
Opednews.com – Will Burma’s President do more tangible political improvement?
The Irrawaddy – Burma to Run US $3.2 Billion Deficit
The Irrawaddy – Political Prisoners, Human Rights on NLD Agenda with UN Envoy
The Irrawaddy – Will Ethnic Issues Be Sidelined?
Mizzima News – Burmese politicians tell Quintana to work for release of political prisoners
Mizzima News – US dollar price in Burma falls to 10-year low
Mizzima News – Calling us ‘insurgents’ makes political dialogue difficult: KIO
DVB News – Karen state minister ambushed
DVB News – President greets parliament with bold speech
DVB News – Suu Kyi positive on co-operation with govt
တစ်လခြောက်သောင်းဖြင့် အရစ်ကျတိုက်ခန်းများ ရောင်းချပေးသွားမည်
တစ်လလျှင် ခြောက်သောင်းကျပ် အရစ်ကျသွင်းသွားရုံဖြင့် တိုက်ခန်းပိုင်ဆိုင်နိုင်မည့် အိမ်ရာစီမံကိန်းကို တော်ဝင်မိသားစုကုမ္ပဏီမှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် ၄၁ ရပ်ကွက်နှင့် ၄၂ ရပ်ကွက်တို့ကြား မြေကွက်လပ်များပေါ်၌ တည်ဆောက်သွားမည်ဟု သတင်းရရှိသည်။ အဆိုပါအိမ်ရာ၏ တည်နေရာသည် မြောက်ဥက္ကလာပ အ၀ိုင်း၊ ဘေလီတံတား၊ စက်မှုဇုန် စသည်တို့နှင့် နီးပြီး သွားရေးလာရေး လွယ်ကူသော နေရာ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ဤတန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာ စီမံကိန်းသည် ဆင်းရဲမွဲတေမှု တိုက်ဖျက်ရေးကို ရည်ရွယ်ကြောင်း၊ အစိုးရ၀န်ထမ်းများ၊ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများ အတွက် ပုံစံတစ်မျိုး၊ အခြေခံလူတန်းစားများ အတွက် ပုံစံတစ်မျိုး တည်ဆောက်သွားမည် ဖြစ်ပြီး တစ်လလျှင် ငွေကျပ် ခြောက်သောင်းခန့် ပေးသွင်းသွားရုံဖြင့် အိမ်ခန်းပိုင် ရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ အမြင့်ဆုံး ၆ လွှာအထိသာ ဆောက်လုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ အိမ်ရာများကို စနစ်တကျ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်သွားမည် ဖြစ်သလို အခြေခံအဆောက်အဦများ ဖြစ်သည့် ကျောင်း၊ ဆေးခန်း၊ ဈေးဆိုင်တန်း စသည်တို့ကို ထည့်သွင်း တည်ဆောက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ထို့အပြင် တော်ဝင်မိသားစုကုမ္ပဏီ၏ Taw Win Development Foundation ၏ ပညာရေး အထောက်အပံ့ ပေးခြင်းများကို အဆိုပါ အိမ်ရာတွင် နေထိုင်မည့် မတတ်နိုင်သော ကလေးငယ်များ၊ လူငယ်များသို့ပါ ပေးအပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း တော်ဝင်မိသားစုကုမ္ပဏီ၏ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက mmDailyNews သို့ ပြောပြခဲ့သည်။
လတ်တလော၌ အိမ်ခန်းတစ်ခန်း၏ တန်ဖိုးကို ကျပ် ၂၅ သိန်းခန့် သတ်မှတ်ထားပြီး အမှန်တကယ် အိမ်ပိုင် မရှိသေးသူများကိုသာ စိစစ်ရောင်းချသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ မိသားစုတစ်စုလျှင် အိမ်ခန်းတစ်ခန်းသာ ရောင်းချပေးမည်ဖြစ်ပြီး မကြာခင် စတင် တည်ဆောက် တော့မည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အိမ်ခန်းတစ်ခန်းကို စတုရန်းပေ ၂၀၀ ခန့်သာရှိမယ်လို့ သိရပါတယ်..။
ခုခေတ်လူတွေရဲ့ဝင်ငွေနဲ့ အခွန်အခနဲ့ဆိုရင် ဒီ ၂၅သိန်းတန် တိုက်ခန်းကျဉ်းကျဉ်းလေးကိုတောင် မ၀ယ်နိုင်တဲ့သူတွေ အများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်..။
ှုIndia နိုင်ငံ Ta Ta Co., က လည်း မကြာသေးမီက Mini တိုက်ခန်းလေးတွေကို
ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ ရောင်းပေးမယ်လို့ ကြေငြာတာ ဖတ်လိုက်ရပါတယ်..။
အခြေခံလူတန်းစားများအတွက် အဆင့်မီတိုက်ခန်းများ ၀ယ်ယူနေထိုင်နိုင်ကြစေဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်..။
information အတွက်ကျေူဇူးပါပဲ Mini တိုက်ခန်းလေးတွေအကြောင်းသိရရင်လဲတင်ပေးပါဦး
“ခုခေတ်လူတွေရဲ့ဝင်ငွေနဲ့ အခွန်အခနဲ့ဆိုရင် ဒီ ၂၅သိန်းတန် တိုက်ခန်းကျဉ်းကျဉ်းလေးကိုတောင် မ၀ယ်နိုင်တဲ့သူတွေ အများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်..။”
စတုရန်း ၂၀၀ ဆိုတော့ ၁၀ x ၂၀ ပဲ ရှိမှာ ဆယ်ပေပတ်လည် ၂ ခန်း
ရှေ့ တခန်းက အိပ်ခန်း နောက် တခန်းက မီးဖိုခန်း
ဘယ်မှာ ရေချိုးခန်း၊ အိမ်သာ၊ ဧည့်ခန်း
နောက်ပြီး တလ ၆၀၀၀၀ ဆိုတော့ လခ ဘယ်လောက်ရလို့ သွင်းရမှာလဲ
ရာဇာဓိရာဇ်လမ်း နဲ့ မင်းရဲကျော်စွာလမ်းကြားက မြို့ကွက်ဖေါ်ကတည်းက မပါမဖြစ် တမင်ထည့်ဆွဲထားရတဲ့ မီးတားကွက်ကြီးကို စစ်တပ်ထဲက ကဗျာကသီထွက်လာတဲ့ကောင်တွေက ဘာမသိညာမသိ ပညာတစိမှမပါပဲ ပိုက်ဆံရဘို့သက်သက်အတွက် ထိုးရောင်းထားတဲ့ နေရာမှာဆောက်မှာ။
နေရာကတော့ ရှယ် နေရာကောင်းပဲ။ တခုပဲပြောစရာရှိတယ်။ အသိဥာဏ်ရှိတဲ့ အစိုးရတခုတက်လာရင် အဲဒါကြီးကိုကော်ထုတ်ပစ်ရမှာစိုးတယ်။
ဒေါက်တာရေ – တလ ၆၀၀၀၀ ဆိုတာက တကယ်ရမယ့်လူတွေသွင်းရမှာပါ။ သူတို့အများစုက လစာအပေါ်မှီခိုရမယ့်သူတွေ မဟုတ်လောက်ပါဘူး။ တကယ်နေချင်သူတွေက တဆင့်ပြန်ငှား/၀ယ် ပြီးနေကြရမှာပါ။
ကနဦး တိုက်ခန်းဝယ်ခွင့်ရသူတွေရော တဆင့် ပြန်ငှား/၀ယ်နေရသူတွေပါ မြန်မာပြည်ရဲ့စံနှုံးအရ ဆင်းရဲမွဲတေသူတွေ မဟုတ်ကြပါဘူး။ သူတို့အောက်မှာ – အများကြီး …အများကြီး …..အများကြီး…..
မြေကြီး စားသူများ၊ ပါမစ် စားသူများရဲ့ အခန်းဆက် တိုက်ခန်း စားသူများ ဖြစ်မှာပေါ့။
Steven Jobs တစ်ယောက် Apple အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် (Chief Executive) အဖြစ်က နှုတ်ထွက်ကြောင်း (၂၄-၈-၂၀၁၁) New York Times သတင်းစာမှ ဖတ်ရပါတယ်..။
သူ့အနေနဲ့ တာဝန်များကို အပြည့်အ၀မထမ်းဆောင်နိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်..။
အသက် (၅၆)နှစ်ရှိ Jobs ဟာ ၂၀၀၄ ခုနှစ်က ပန်ကရိယကင်ဆာရောဂါအတွက် ခွဲစိတ်မှုခံယူခဲ့ရပြီး ၂၀၀၉ခုနှစ်မှာ အသည်းအစားထိုးကုသမှု ခံယူခဲ့ရပါတယ်.။
Jobs အနေနဲ့ သုံးစွဲသူတွေစိတ်ကြိုက် စိတ်ကူးပုံဖော်နိုင်ခဲ့လို့ Apple ဟာ ကမာပေါ်မှာ တန်ဖိုးအကြီးမားဆုံးနဲ့ လူတွေကို အလွှမ်းမိုးနိုင်ဆုံး Co., တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်..။
CEO အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ရာထူးနေထွက်ပေမဲ့ ဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကဌ Chairman ရာထူးမှာတော့ ဆက်ရှိနေပါသေးတယ်။ Apple ရှယ်ယာဈေးနှုန်းမျာ ကနဦးသတင်းထွက်ချိန်မှာ ကျဆင်းသွားပေမဲ့ ဈေးပိတ်ချိန်မှာ ရှယ်ယာဈေးများ ပြန်တက်လာခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးရန် အဆိုကို တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းက ထောက်ခံကြပြီး လွတ်ငြိမ်းမိန့်အတွက် သမ္မတကြီးထံ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးမှ အဆိုတင်သွင်း
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမရှိဟု အစိုးရမှ ငြင်းဆိုနေခြင်းကြောင့် “နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား” ဟူသည့် အသုံးအနှုန်းကို ရှောင်ကာ “ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရသူများ” စကားရပ်ဖြင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးရန် အဆိုကို သြဂုတ်လ ၂၅ရက်နေ့က လွှတ်တော်တွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ် ဦးသိန်းညွန့်က တင်သွင်းလိုက်ကြောင်း၊ ယင်းအဆိုကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရှိ တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းက ထောက်ခံလိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဆက်လက်၍ အထွေထွေလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အမိန့် ဆက်လက် ထုတ်ပြန် ပေးရန်အတွက် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဖြစ်သူ ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုကိုမှတဆင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးထံ အဆိုပြုလိုက်ကြောင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော်သတင်းရပ်ကွက်မှ တစ်ဆင့် ကြားသိရသည်။
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများလွတ်မြောက် စေရေးအတွက် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးရန် အဆိုကို ဒီမိုကရေစီပါတီ ၁၁ ပါတီဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ဒီမိုမိတ်ဆွေပါတီများ အစုအဖွဲ့မှ ၁၃ ဦး၊ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရပါတီဖြစ်သည့် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ ၂ ဦးက ဆွေးနွေးထောက်ခံခဲ့ပြီး၊ တပ်မတော်သား ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးက ထပ်မံ ထောက်ခံ ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းအဆိုကို ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ် ၂ ဦးက နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကိစ္စရပ်ကို တည်ဆဲဥပဒေများဖြင့် ထောက်ပြပြောဆိုမှုများ ပြုလုပ်ကာ ထောက်ခံခဲ့ပြီး တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးက မိမိတို့နှင့် တိုက်ပွဲများတွင် လက်တွဲခဲ့ကြသည့် ရဲဘော်များလည်း အကျဉ်းထောင်အတွင်းရှိနေကြောင်း မိမိတို့အနေဖြင့် ယင်းရဲဘော်ရဲဘက်များကိုပါ အကျဉ်းကျနေရာမှ လွတ်စေလိုကြောင်း တခဲနက် ထောက်ခံဆွေးနွေးခဲ့သည်ဟု လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးကဆိုသည်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် အထွေထွေ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးရန် အဆိုကို တပ်မတော်က ထောက်ခံသည့် ကိုယ်စားလှယ်များမှာ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၏ ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် တက်ရောက်နေသည့် တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များတွင် အဆင့်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည့် ဗိုလ်မှူးကြီးတစ်ဦးနှင့် ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီးတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
နောက်လဆန်းမှစပြီး ဟိုတယ်များတွင် FEC လက်မခံတော့ဟု ကြားသိရ
နိုင်ငံခြားသား ခရီးသည်များ ဟိုတယ်အခန်းများငှားရမ်းရာတွင် ယခင်က FEC ဖြင့်ပေးချေမှုကို လက်ခံနေသော ဟိုတယ်များသည် ယခု လကုန်ပိုင်းမှစတင်ကာ FEC ဖြင့်ပေးသွင်းမှုကို လက်ခံတော့မည်မဟုတ်ကြောင်း ဟိုတယ်များမှ ခရီးသွား ကုမ္ပဏီအချို့ထံ အကြောင်းကြားထား ကြောင်း သိတင်းရရှိသည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင်းခရီးသွားလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူတစ်ဦးမှ ယခုကဲ့သို့ ဟိုတယ်များမှ FEC ငွေဖြင့်ပေးသွင်းမှုကို လက်မခံတော့ခြင်းမှာ မကြာသေး ခင်ကာလများက FEC ငွေကိုပြန်လည် ရုပ်သိမ်းမည်ဆိုသည့် သတင်းများ ထွက်ပေါ်လာပြီး နောက်ပိုင်း FEC ဈေးနှုန်းများ ကျဆင်းခဲ့ကြောင်း ပြောကြားသည်။ ၎င်းမှဆက်လက်၍ FEC ကိုရုပ်သိမ်းခြင်း မရှိသေးသော်လည်း နောင်ဖြစ်လာမည့်အခြေအနေကို ခန့်မှန်းနိုင်ခြင်း မရှိသေးသဖြင့် လက်မခံခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းညိန်းမှ FEC ငွေကိုပြန်လည်ဖျက်သိမ်းမည်ဟုပြောကြားခဲ့ပြီး FEC ကိုင်ဆောင်ထားသူများ နစ်နာမှု မရှိစေရန် ကာလပေါက်ဈေးနှင့်ညီမျှသော မြန်မာကျပ်ငွေ (သို့) အမေရိကန် ဒေါ်လာနှင့် လဲလှယ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
လက်ရှိ ပြည်တွင်းငွေကြေးဈေးကွက်တွင် FEC အ၀ယ် မရှိတော့သလောက် ဖြစ်နေပြီး ဒေါ်လာဈေးသည်လည်း သြဂုတ်လ ၂၃ ရက်နေ့က ၆၇၅ ကျပ်အထိ မြန်မာ့စံချိန်တင် ကျဆင်းခဲ့လေသည်။ ထိုသို့ ငွေဈေး အတက်အကျ ကြမ်းနေခြင်းကို အချိန်မီ ထိန်းချုပ်နိုင်သော စနစ် ပေါ်မလာပါက မြန်မာ့စီးပွားရေး တိုးတက်ရေးအတွက် ကြီးစွာသော အနှောင့်အယှက် ဖြစ်လာဖွယ် ရှိကြောင်ါးရင့် စီးပွားရေး ပါမောက္ခတစ်ဦးက mmDailyNews သို့ သုံးသပ်ပြခဲ့သည်။